မူးယစ်ဆေးဝါးသည်ဆုကြေးငွေလိုငွေပြမှုနှင့် Stress Surfeit Disorder (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ဖြစ်သည်
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 4: 72 ။
2013 သြဂုတ်လ 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2013.00072
မူးယစ်ဆေးစွဲသုံးဇာတ်စင်သံသရာနေဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည် - မူးရူး / မူးယစ်, ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် - သောဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် allostatic အပြောင်းအလဲများကိုပါဝငျသညျ။ အားဖြည့်, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်, နှစျယောကျမူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်ကဒီ allostatic လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆခဲ့ကြ. အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် key ကို neurochemical ဒြပ်စင်၏ dysregulation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များထံမှရယူထားခြင်းမှတွေးဆနေပါတယ်. ဤအအဆောက်အဦများအတွက်တိကျသော neurochemical element တွေကိုသာပါဝင်သည်ဆုလာဘ်စနစ်က function ကို (အတွင်း-system ကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ) ဒါပေမယ့်လည်း ventral striatum အတွက် corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကကမကထပြုခဲ့ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့် dynorphin-κ opioid စနစ်များစုဆောင်းမှု, တိုးချဲ့အတွက်လျော့နည်းစေ amygdala နှင့်တိုကျရိုကျ cortex (နှစ်ဦးစလုံးအကြား-system ကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ) ။
CRF ရန်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုး, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့နှင့်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်းယူပြီး compulsive ကဲ့သို့မူးယစ်ပိတ်ဆို့။
အလွန်အကျွံမူးယစ်ဆည်းပူးနေကိုလည်းအကူးအပြောင်း compulsive ကဲ့သို့တုံ့ပြန်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုအားဖြင့် paralleled အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် CRF ၏ activation, ပါဝင်နေသည်။
Neuropeptide Y ကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက် Anti-စိတ်ဖိစီးမှု neurotransmitter, compulsive ကဲ့သို့အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့ CRF ဆင်တူအပေါ်အရေးယူတဲ့ပရိုဖိုင်းရှိပါတယ်1 ရန်။ အဆိုပါκ opioid စနစ်၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာနှင့်ဆက်စပ် dysphoric ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပိတ်ဆို့နှင့် compulsive ကဲ့သို့ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာကိုအထောက်အကူပြုရန်အခြားအစွမ်းထက်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကအကြံပြု, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်တိုးခွင့်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပါ။ ဦးနှောက်စနစ်များဆုလာဘ် function ကိုနှင့်စုဆောင်းမှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုစွဲလမ်း၏ compulsive မောင်းတဲ့အစွမ်းထက် neurochemical အခြေခံသည်။
keywords: ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်တိုးချဲ့ amygdala, corticotropin-releasing အချက်, dynorphin, ဆုလာဘ်, compulsive, ရုပ်သိမ်းရေး, prefrontal cortex
စွဲလမ်း (ဈ) မူးယစ်ဆေးရှာယူနေတဲ့မလှူ, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု (ii) အရှုံးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏ (iii) ပေါ်ပေါက်ရေး (ဥပမာ dysphoria ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာထားပြီးကြောင်းရောဂါ relapsing တစ်နာတာရှည်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် မူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးသောအခါစိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်တိုတာတွေ) (ကစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင်း1) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရံဖန်ရံခါ, ကန့်သတ်, အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာရာမှဆေးခန်းကွဲပြားသည်။
စွဲသုံးဇာတ်စင်သံသရာအဖြစ် conceptualized ထားပြီး - မူးရူး / မူးယစ်, ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် - ထိုကာလကိုကျော်ပိုဆိုးလာရင်နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် allostatic အပြောင်းအလဲများကိုပါဝငျသညျ။ အားဖြည့်, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်, နှစျယောကျမူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်ကဒီ allostatic လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆခဲ့ကြသည်။ အပြုသဘောအားကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသောအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်လျက်ရှိ၏ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ထားတဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (သို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏အမှု၌ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်) ၏ဖယ်ရှားရေးတစ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသောအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆုလာဘ်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေဒါပေမယ့်လည်းအပြုသဘော hedonic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့မဆိုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အပြုသဘောအားကောင်းရန်အလားတူသတ်မှတ်ထားသည်။ စမ်းသပ်ဆဲစိတ်ပညာကနေမတူညီတဲ့သီအိုရီအမြင်များ (အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်မူဘောင်), လူမှုရေးစိတ်ပညာ (Self-စည်းမျဉ်းပျက်ကွက်မူဘောင်) နှင့် neurobiology (counteradaptation အရေးကြီးတဲ့မူဘောင်) ကိုစွဲသံသရာ၏အဆင့်ဆင့်အပေါ် superimposed နိုင်ပါတယ် (1) ။ ဤရွေ့ကားအဆင့်ဆင့်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့အစာကျွေးပိုပြီးပြင်းထန်ဖြစ်လာ, နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စဉ်းစားနေကြ စှဲမွဲမှု (ပုံ (Figure1) .1) ။ ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်များနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ: အ allostatic neuroadaptations အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအားဖြည့်များ၏နှစ်ခုသတင်းရင်းမြစ်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာဟာရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောနှစ်ခု key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များများမှဖြစ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးရှာဘို့လှုံ့ဆျောမှုမှစွဲသံသရာသက်ဆိုင်သောသီအိုရီမူဘောင်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့် Construction ၏ဆွေမျိုးအလှူငွေအတွက်အပြောင်းအလဲ [ပြသ ...
တစ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏ comprehension ကိုအလွန် (အိုးနှင့် Milner အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်များရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့် facilitated ခဲ့သည်2) ။ ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့် neurocircuitry ကပါဝင်ပတ်သက်ပေမယ့်အများဆုံးအထိခိုက်မခံဆိုဒ်များ ([သည့် Basal forebrain အတူ ventral tegmental ဧရိယာကိုဆက်သွယ်သော medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏လမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်2-4); ဂဏန်း Figure2] .2]. အားလုံးအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ acute ဆိုလိုသည်မှာတိုးမြှင့သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်လွယ်ကူချောမွေ့ [ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်တံခါးလျော့; (5)] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာဆုလာဘ်တံခါးခုံတိုးပွါး (ဆုလာဘ်လျော့ချ)။ အများကြီးအလေးပေးပိုင်းတွင် monoamine စနစ်များ, အထူးသဖြင့် dopamine စနစ်အားတက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ထားရှိခဲ့သော်လည်း, ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်ဖြန်ဖြေအတွက် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၌, medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးရှိအခြား Non-dopaminergic စနစ်များကိုရှင်းလင်းစွာ (ကသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ6-8). အမှန်စင်စစ် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပိုပြီးသွယ်ဝိုက်ဖြစ်တွေးဆသည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများ mesolimbic dopamine စနစ်၏တက်ကြွစွာ environmen အတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖို့မက်လုံးပေး salience အလေးထားကြောင်းအကြံပြုt ကို (9-11) ဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မောင်းထုတ်ရန် (12) သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့် activation (13, 14), နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်အလုပ်ကဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါ medial forebrain အစုအဝေးအတွင်းအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ Neurotransmitter လမ်းကြောင်းများနှင့်အဲဒီ receptor စနစ်များ။ တစ် ဦး sagittal ကြွက် ဦး နှောက်အပိုင်းပြသနေသည်။ medial forebrain အစုအဝေးသည်တက်နှင့်အဆင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေသော neurochemical အလွှာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဗဟုသုတဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်စနစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမှသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။ ဤရွေ့ကားအလွှာဟာမူလတန်းအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာကနေပံ့ပိုးမှုများကို, နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala အတူ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးဆုလာဘ်စနစ်၏ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်သည်။ အများကြီးအထောက်အထား psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများသိသိသာသာ, ကန့်သတ်-access ကိုမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနှင့်ဤယန္တရားကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေဘို့အရေးပါကြောင်းအမ်ဖီတမင်းဟာ mesolimbic dopamine စနစ် (အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာများမှနျူကလိယ accumbens ဖို့ပရိုဂျက်) ကိုသက်ဝင်သောယူဆချက်ကို support နှင့်နီကိုတင်း။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထား opioid နှင့်အရက်အကျိုးသည် dopamine-မှီခိုနှင့် dopamine-လွတ်လပ်သောအာရုံကြောအလွှာနှစ်ခုလုံးကို support (15-17). serotonin စနစ်များ, serotonin 5-HT ပါဝင်သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား1B နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်μ-opioid receptors opioids ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေသော်လည်းယင်းနျူကလိယထဲမှာအဲဒီ receptor activation accumbens လည်း, psychostimulant မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့် amygdala အတွက် Opioid peptides အကြီးအကျယ် opioid ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်အခြေခံပြီးအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှုအားဖြည့်လူတန်းစားပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆခဲ့ကြသည်။ Inhibitory γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) စနစ်များဆေးများ intoxicating မှာအီသနောအားဖြင့် amygdala အတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptically နှစ်ဦးစလုံး activated နေကြပြီး, ဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor ရန် (ကြည့်မြင်ပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် [အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့16, 17)] ။
အတွက် မူးရူး / မူးယစ်ဇာတ်စင် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏, ထိုလူတန်းစား၏လေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့် se နှုန်း key ကို neurobiological အလွှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အထောက်အထား, psychostimulants အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားအတွက် dopamine များအတွက်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ခိုင်မာ opioids ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားအတွက် opioid peptide receptors, နှင့်စူးရှအတွက်ဂါဘမြို့သားများနှင့် opioid peptides အရက်၏လုပ်ရပ်များအားဖြည့်။ အရေးကြီးခန္ဓာဗေဒဆားကစ်ပု ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens အပေါ်ဆုံနှစ်ဦးစလုံး၏ဒေသခံ opioid peptide စနစ်များ, (ခုနှစ်တွင်အစပြုသော mesocorticolimbic dopamine စနစ်ကပါဝင်သည်17).
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုဖိအား acute သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်နာတာရှည်ပြည်နယ်နှင့်မျိုးစိတ်-ပုံမှန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်း neurochemical စနစ်များအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များတွင်ဤအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှအေးခဲနေသောထံမှအထိနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်လူသားများတွင်အလားတူအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအဘို့မျက်နှာနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုရှိသည်။ ဥပမာ, ဖိအားနှင့်ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအနေနဲ့ဆန္ဒရှိနှိုးဆွဖို့အေးစက်ကွောကျရှံ့သောလှုံ့ဆော်မှု, တစ်ဦးထိတ်လန့်လှုံ့ဆော်မှု, ပွင့်လင်းဒေသများ၏ရှောင်ရှားခြင်း, ပွင့်လင်းလက်နက်, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်တစ်ခုတိုးမြှင့်ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်မျိုးစိတ်-ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတိုးမြှင့်ခဲတုံ့ပြန်မှုကိုပြသပါလိမ့်မယ် (ဥပမာ, အစစ်မွှေးစမ်းသပ်မှုအတွက်ထိတ်လန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမြှုပ်) ။ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေကြောင်း circumscribed neurocircuitry နှင့်အတူ Key ကိုအာရုံခံ / neurochemical စနစ်များ glucocorticoids, corticotropin-releasing အချက် (CRF), norepinephrine နှင့် dynorphin ပါဝင်သည်, နှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုဆန့်ကျင်ပြုမူကြောင်း key ကို neurochemical စနစ်များ neuropeptide Y ကို (NPY) တို့ပါဝင်သည်, nociceptin နှင့် endocannabinoids [ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ (18-20)] ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်, စွဲလမ်း၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းကားမောင်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မည်: CRF နှင့် dynorphin ။
Corticotropin-releasing အချက်တစ် 41-အမိုင်နို-အက်ဆစ်ဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်း polypeptide, စာနာနှင့်ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု (ဖြစ်ပါတယ်21, 22). CRF ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုကြွက်များတွင် activation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတုယူနှင့်ယှဉ်ပြိုင် CRF အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်မှုယေဘုယျအားဖြင့်ဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် [ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ (23-26)] ။ နှစ်ဦးကအဓိက CRF receptors CRF အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ1 တိုးချဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်အဲဒီ receptor activation (27) နှင့် CRF2 စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်အတွက်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်လျှောက်လျော့နည်းအတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်စပ်အဲဒီ receptor activation (28, 29), ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တချို့အငြင်းပွားဖွယ်ရာလည်းမရှိပေမယ့် (30) ။ CRF အာရုံခံခြင်း, တိုးချဲ့ amygdala, အ medial septum, အ hypothalamus, အ thalamus, အ cerebellum နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ midbrain နှင့် hindbrain အရေးပါပါ (neocortex ရှိ31) ။ ကျယ်ပြန့်သုတေသနထိန်းချုပ်ရန်အတွက် PVN CRF အာရုံခံများအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြခြင်း, paraventricular အဆိုပါ hypothalamus (PVN) ၏နျူကလိယက, amygdala (CeA) ၏ဗဟိုနျူကလိယကို၎င်း, stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် CRF အာရုံခံအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုမှ pituitary adrenal တုံ့ပြန်မှု (32) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာဖို့အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက် BNST နှင့် CeA CRF များအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍ (33).
အဆိုပါ neuroanatomical entity (ထိုတိုးချဲ့ amygdala ချေါ34) (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်စပ် neuroadaptations ထုတ်လုပ်ရန် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များနှင့်အတူဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုပေါင်းစပ်တဲ့ဘုံခန္ဓာဗေဒအလွှာကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အဆိုပါ CeA, BNST, နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ medial (shell ကို) မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဤအဒေသများတစ်ခုချင်းစီ (cytoarchitectural နှင့် circuitry တူညီရှိပါတယ်34) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ထိုကဲ့သို့သော basolateral amygdala နှင့် hippocampus အဖြစ် limbic အဆောက်အဦကနေမြောက်မြားစွာ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံ, နှင့် ventral pallidum နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ဖို့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်း medial တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ efferents ပို့ပေးဤသို့နောက်ထပ် (ဂန္ limbic interface သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများ defining အဆိုပါ extrapyramidal မော်တာစနစ်ဖြင့်စိတ်ခံစားမှု) အဆောက်အဦများ (35) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက် CRF ရှည်လျားသာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆထားပြီး (36, 37) ဒါပေမယ့်လည်းနာကျင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအတွက် (38).
Dynorphin-κ opioid စနစ်က
Dynorphins အဆိုပါ prodynorphin ရှေ့ပြေးအနေဖြင့်ရယူထားခြင်းနှင့် leucine (leu) ဆံ့ကြောင်း opioid peptides များမှာ -enkephalin မှာ sequence ကို Nယင်းမော်လီကျူး၏ -terminal တစျပိုငျးကိုနှင့်κ opioid အဲဒီ receptor များအတွက်ယူဆရ endogenous ligands များမှာ (39) ။ Dynorphins ကျယ်ပြန့်ခြင်း (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းဖြန့်ဝေနေကြသည်40) နှင့် neuroendocrine စည်းမျဉ်း, နာကျင်မှုစည်းမျဉ်း, မော်တာလှုပ်ရှားမှု, နှလုံးသွေးကြော function ကို, အသက်ရှူ, အပူချိန်စည်းမျဉ်း, နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Response (တစ်အခန်းကဏ္ဍ41) ။ Dynorphins (အားလုံးသုံး opioid receptors မှခညျြနှောငျပေမယ်κ receptors များအတွက်ဦးစားပေးပြသ39). Dynorphin-κအဲဒီ receptor system ကိုတက်ကြွစွာစိတ်ခွန်အားနိုးဒိုမိန်းအတွက်μ opioid receptors ၏သူတို့အားဆန့်ကျင်ဘက်အချို့သောအခြား opioids (analgesia) အလားတူဖြစ်ကြောင်းလုပ်ရပ်များပေမယ့်အခြားသူများကိုထုတ်လုပ်. Dynorphins တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်ဆန္ဒရှိ dysphoric ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆခဲ့ကြ (42-45).
နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor activation shell ကိုနောက်ဆုံးမှာသိသိ adenosine monophosphate တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း (CREB) phosphorylation နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အတွက်နောက်ဆက်တွဲကိုပြောင်းလဲ, prodynorphin mRNA ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအထူးသ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဖြစ်ရပ်များ၏အဆငျ့ဆငျ့ကိုလှုံ့ဆော် accumbens ။ dynorphin စနစ်များနောက်ဆက်တွဲတက်ကြွစွာ mesolimbic dopamine စနစ် dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလျော့ချဖို့နောက်ကျောအစာကျွေးဖို့တွေးဆထားပြီး (46-50) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရေး (51, 52) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများနှစ်ယောက်စလုံးကင်းမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ် dysphoric syndrome ရောဂါအထောက်အကူပြုပေမည်။ Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှုများကိုလည်း prefrontal cortex (PFC) တွင်တည်ရှိသော opioid receptors နှင့် ventral tegmental ဧရိယာκကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးလည်း mesocortical dopamine အာရုံခံ (များ၏ Basal လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ53, 54) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala မှာတော့ပိုကောင်း dynorphin အရေးယူထိုကဲ့သို့သော CRF အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, (လည်းသက်ဝင်စေခြင်းငှါ55), သို့မဟုတ်အလှည့်အတွက် CRF (dynorphin ကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ56, 57).
ဆုကြေးအတွက် dynamic အပြောင်းအလဲများ: ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်
အားဖြည့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ inextricably လှုံ့ဆျောမှု၏ရှောလမုန်၏ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီကယာယီဒိုင်းနမစ်၏အခြေအနေတွင်စွဲထဲမှာ hedonic ထိခိုက်စေ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ကြသည်။ ရှောလမုန်နှင့် Corbit (58), hedonic ထိခိုက်စေ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များတခါအစပျိုးကြောင်း postulated အလိုအလျောက် hedonic ခံစားချက်တွေကိုများ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချသည်ဟုယန္တရားများမှတဆင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ဖြင့် modulated နေကြသည်။ T ကhe တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ် hedonic လေ့ (သို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်) တို့ပါဝင်သည်, နှင့် b-ဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ် hedonic ဆုတ်ခွာ (abstinence) တို့ပါဝင်သည်။ The တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပြင်းထန်မှု, အရည်အသွေး, နှင့်စစ်ကူများကြာချိန်နှင့်အတူနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပါသည်နှင့်သည်းခံစိတ်ပြမကြာမီတစ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်အပြီးဖြစ်ပေါ်, အပြုသဘော hedonic တုံ့ပြန်မှုပါဝင်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြဘခုနှစ်, b-ဖြစ်စဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပြီးနောက်ပေါ်လာသော တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို ရပ်စဲထားပြီး, အနုတ်လက္ခဏာ hedonic တုံ့ပြန်မှုပါဝင်ပါသည်နှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းနှေးတစ်ခု asymptote အထိတည်ဆောက်ရန်နှေးကွေးစတင်ခြင်း, အတွင်းနှေးကွေးသည် ဖြစ်. , အထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပိုမိုကြီးမားရရှိသွားတဲ့။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားသောစာတမ်းဟာအဘို့အကောင့်တစ်ခုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် neurochemical စနစ်များအတွက် neurocircuitry ပြောင်းလဲမှုရှိကွောငျးဖြစ်ပါသည် b-ဖြစ်စဉ်ကို။ ထိုသို့သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်က function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုဒါပေမယ့်လည်းဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏စုဆောင်းမှုကိုသာထင်ဟပ်စောစောမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေအတွက်စတင်တွေးဆနေကြပါတယ်။ ထို့ပြင်ကျွန်တော်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးစနစ်များ၏စုဆောင်းမှုစွဲအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များ၏အဓိကရင်းမြစ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် hypothesize ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဆုလာဘ် / စိတ်ဖိစီးမှု function ကို၏ homeostasis တစ်ပြန်ပေမယ့်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်မောင်းထုတ်ရန်ဆက်လက်ဆုလာဘ် / စိတ်ဖိစီးမှု function ကို (ပုံ၏ allostasis ထဲမှာမဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေးဆခဲ့ကြ (Figure33).
(က) ထုတ်လုပ်ထိခိုက်စေဒိုင်းနမစ်၏စံပုံစံ (လက်ဝဲဘက်non-မှီခိုပြည်နယ်အတွက်) တစ်ဦးအတော်လေးဝတ္ထုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ) နှင့် (မှန်သောတစ်ဦးအပေါ်မှီခိုပြည်နယ်အတွက်) တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်, မကြာခဏထပ်တလဲလဲခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ) [ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား ...
မူလက arousal နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ function ကို၏ persistent ရောဂါရှင်းပြဖို့ conceptualized အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် Allostasis "ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်ရေး။ " Allostasis အပေါင်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပွနျလညျပွုပွငျ၏စဉ်ဆက်မပြတ် reevaluation အတူမဟုတ်ဘဲ homeostasis ၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများထက် feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားကပါဝင်ပတ်သက် အသစ်တစ်စုံအချက်များဆီသို့ parameters တွေကို။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် ယင်း၏သာမန် (homeostatic) လည်ပတ်မှုအဆင့်ကို (ကနေစည်းမျဉ်းစနစ်၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး15). Allostatic ဝန် ကို "အချိန်ကိုကျော်စုဆောင်းနှင့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစုစည်းနေခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း allostasis ၏ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်" (အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ59).
ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုကဲ့သို့အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ (အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အားဖြင့်လူသားတွေအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြီ60-62) ။ အလားတူရလာဒ်များအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေး hedonic သေံတစ်အတိုင်းအတာအဖြစ် intracranial Self-stimulation (ICSS) ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နာတာရှည်ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ (63), စိတ်ကြွဆေး (64), opioids (65), cannabinoids (66), နီကိုတင်း (67) နှင့်အီသနော (68) စူးရှ abstinence စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးစေပါတယ်နှင့်တံခါးခုံတွင်ဤဓာတ်လှေကားအချို့ 1 မှတက်ဘို့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ် ရက်သတ္တပတ် (69) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ဟာ hedonic ဒိုမိန်းအတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များအနေနဲ့သတ်မှတ် neurobiological အခြေခံရှိသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်ယန္တရားများ defining များအတွက်တွန်းအားပေးသောအယူအဆမှယုံချေးငှားရမည်။ ဆုလာဘ်တံခါးခုံ၌ဤတိုးမောင်းသောယန္တယားကိုနားလည်ခြင်းစွဲအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောယန္တယားကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းထိုသို့သောမြင့်တက်လျှင်မြန်စွာစတင်နှင့် (Self-အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုတည်း session တစ်ခုအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်70) စူးရှသောဆုတ်ခွာလူ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများတစ်ဒီကဗျာအကြံအစည်ဆောင်သော။ Dysphoria ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းစူးရှ opioid နှင့်အီသနောဆုတ်ခွာအတူလိုက်ပါ (71, 72) ။ ဤတွင်, မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းထိုးအောက်ပါ naloxone အုပ်ချုပ်ရေးထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆုလာဘ် ICSS ဖြင့်တိုင်းတာတံခါးခုံ, နှင့်တိုးမြှင့်တံခါးတိုးလာ (71) ။ အလားတူရလာဒ်များ (အီသနောထံမှထပ်ခါတလဲလဲစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်72).
တဦးတည်းအယူအဆမူးယစ်ဆေးစွဲ Robinson နဲ့ Berridge (နေဖြင့်စောဒကတက်အဖြစ်အမှန်ပင်, မက်လုံးပေး salience ၏အကဲဆတ်ခြင်းပုံစံပါဝင်စေခြင်းငှါအပြုသဘောအားကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်မှဖြစ်စဉ်များကြောင့်9), အစွမ်းထက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို set up ကြောင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များ၏ာင်းရန်။ ဒီအယူအဆ၏တစ်ဦးကထပ်မံပီပီပု neurocircuitry အဆင့်မှာအကျိုးကိုစနစ်၏အလွန်အကျွံ activation မှ within- နှင့်အကြား-system ကို neuroadaptations နှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အတွင်း-system ကို neuroadaptations မူးယစ်ဆေး (ဆားကစ်က) ကိုယ်တိုင်ကမှမူလတန်းဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှု element ကမူးယစ်ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုထောင်ဖို့ adapts သောလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများဇွဲမူးယစ်ဆေးလိုက်လျောညီထွေထုတ်လုပ်ပျောက်သွားပြီးနောက်။ တစ်ဦးကကြားက-system ကို neuroadaptation တစ် circuitry ပြောင်းလဲမှု, ရသော B ကဆားကစ် (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် Anti-ဆုလာဘ်ဆားကစ်) circuit ကိုတစ်ဦးက (ဆိုလိုသည်မှာအကျိုးကိုဆားကစ်) က activated နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကျမ်းများတွင်အတွင်း-system ကို neuroadaptations သည် dynamically ရသော circuit ကို B ကိုတစ်ဦးအကြား-system ကို neuroadaptation, (ဆိုလိုသည်မှာ anti-ဆုလာဘ်ဆားကစ်) နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ် circuit ကိုတစ်ဦး၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှိမ်နင်းရန်အပြိုင်တွင်သို့မဟုတ်စီးရီးအတွက်ဖြစ်စေ activated ဖြစ်ပါတယ် (အောက်တွင်ကြည့်ရှု ) ။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်တစ်ဦးကတိုးတက်သောတိုးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသောအဓိကအမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်များ၏စံနှုန်းများနှင့်အတူတရားဝင်မှုရင်ဆိုင်ရရှိပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 4th ထုတ်ဝေ (DSM-IV): (အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်း 1994) "အဆိုပါပစ္စည်းဥစ္စာကိုမကြာခဏပိုကြီးတဲ့ပမာဏနှင့်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ထက်ပိုရှည်ကာလအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်" ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းပုံစံအရာနှင့်အတူတစ်ဦးကမူဘောင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်၏မကြာသေးမီတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကတော့ neuropharmacological နှင့်စူးရှသောကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ neurobiological အခြေစိုက်စခန်းများရှာဖွေစူးစမ်းရည်ရွယ်အတွင်း-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းများအားဖြင့်ထောက်ပံ့အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအနက်ကိုခွင့်ပြုပါရန်ယနေ့အ နေ့မှစ. တည်ငြိမ်အပြုအမူများတည်ထောင်ခြင်းပါဝင်ပတ်သက်။ 1998 အထိ, Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်ကြွက်ပုံမှန်အား3အဘို့ကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည် ဇသို့မဟုတ်စားသုံးမှုနှင့်နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအကြားတုံ့ပြန်၏ပုံစံများမြင့်မားတည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်တည်ထောင်ရန်တစ်နေ့လျှင်လျော့နည်း။ ဤသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားများအတွက် neurobiological အလွှာဟာရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်အသုံးဝင်သောပါရာဒိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ differential ကို access ကိုပု compulsive ကဲ့သို့စွဲလမ်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတုံ့ပြန်ပိုမကျြနှာကိုတရားဝင်မှုရှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူအပေါင်းတို့ကိုအဓိကမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့် (ပုံခွင့်ပြုခဲ့ပြီ (Figure4) .4) ။ တိုးမြှင့်စားသုံးမှုသွေးကြောသွင်းကင်း, စိတ်ကြွဆေး, ဘိန်းဖြူများနှင့်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်များနှင့်မှီခိုနေစဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ပါးစပ်အရက် (များအတွက်တိုးချဲ့-access ကိုအုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်73-79) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါ, တိရိစ္ဆာန်များ 1 နှင့်6များအတွက်လက်လှမ်းမီခွင့်ပြုခဲ့သည် ကိုကင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများမှဇ, တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်, နှစ်ဦးစလုံးဟာရှည် access ကို (LgA) နှင့်ရေတို access ကို (Sha) တိရိစ္ဆာန်များကသူတို့ကင်းစားသုံးမှု titrated, ဒါပေမယ့် LgA ကြွက်တသမတ်တည်းစမ်းသပ်ပြီးမဆိုထိုးမှာနီးပါးနှစ်ကြိမ်အများကြီးကိုကင်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, နောက်ထပ်အကြံပြုခြင်း ယင်းဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များ (ထဲမှာကိုကင်းဆုလာဘ်များအတွက် set ကိုအမှတ်တစ်အထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီ80-82).
(က) ကိုကင်းစားသုံးမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ယုတ် ± SEM) ။ ရှည်လျားသော-access ကို (LgA) ကြွက် (ခုနှစ်တွင်n = 12) သော်လည်းမတိုတောင်း-access ကို (Sha) ကြွက် (n = 12), ယုတ်စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့ ...
တိရိစ္ဆာန်များ (ပစ္စည်းမှီခိုမှုအတွက်အခြား DSM-IV စံ) "ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏မျက်နှာကိုအတွက်တုံ့ပြန်ရန်ဆက်လက်" မည်သည့်အတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဝင်ရောက်ခွင့် compulsive တူသောထုတ်လုပ်တုံ့ပြန်တိုးချဲ့သောအယူအဆ, တင်းမာမှုပြသသောတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကိုက်ညီ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတွင်လည်းပြပွဲအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့် [(83-85); ဂဏန်း Figure5] .5] ။ တိုးတက်သော-အချိုးအတွက်တိုးမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုပြေးလမ်းမော်ဒယ်အတွက်ရည်မှန်းချက်အချိန်တစ်လျော့နည်းသွားအောင်းနေချိန်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် reinstatement ပါဝင်သည်ပြီတုံ့ပြန်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မက်လုံးပေးဆိုးကျိုးများအတွက်အပြောင်းအလဲများ နှင့်ပြစ်ဒဏ်၏မျက်နှာကိုအတွက်တုံ့ပြန် (86-92) ။ စုစုပေါင်းအဲဒီရလဒ်တွေကိုတိုးချဲ့-access ကိုအတူယူမူးယစ်ဆေးဝါးကိုရှာကွဖို့လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တချို့က (တိုးမြှင်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဆုလာဘ်၏ထိခိုက်မခံတဲ့ထင်ဟပ်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ93), ဒါပေမယ့် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းလေ့လာမှုများ locomotor ာင်းတင်းမာမှုများ၏လွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြု (94-96) ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်အဆိုပါတိုးမြှင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်တံခါးနှင့် neuropharmacological လေ့လာမှုများတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်းယူပြီးတိုးမြှင့မူးယစ်ဆေးမောင်းတဲ့ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုပြည်နယ်များအတွက်ငြင်းခုန်။
(က) တစ်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်တုံ့ပြန်ကြွက်များအားဖြင့်ကိုကင်းများထိုး-တုံ့ပြန်မှု function ကို။ ကြွက် 1 အတွင်းအားဖြည့်အောင်မြင်ရန်မပြုခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးတိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားကိုအောက်မှာစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအဆုံးသတ် ဇ။ အဆိုပါဒေတာကိုဆေးထိုး၏နံပါတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် ...
ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း compulsive သောအယူအဆဦးနှောက်ဆုလာဘ် homeostasis အတွက်နာတာရှည်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်တံခါး၏အစီအမံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ကြာရှည်သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။6(သွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့်ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ differential ကို access ကိုပု LgA အုပ်စုတွင်တနေ့ထက်တနေ့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ပြသခွင့်ပြုခဲ့တိရိစ္ဆာန်များ ဇ; LgA) ဒါပေမယ့်မ Sha အုပ်စု (1 ဇ; Sha) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဖို့ differential ကိုထိတွေ့မှု (အဆက်ဆက်သည် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးသိသိသာသာတဖြည်းဖြည်း LgA ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကြောင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း Sha သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်ခဲ့97) ။ အခြေခံဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းဓာတ်လှေကားယာယီရှေ့ပြေးခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းကိုကင်းစားသုံးမှု (ပုံထဲမှာတင်းမာမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (Figure6) .6) ။ ဆုလာဘ်တံခါးမှာ Post-session ကိုမြင့်တက်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်အဆင့်ဆင့်ကနေပိုပိုပြီးသှဖေညျသှားစီနောက်ဆက်တွဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုစတင်ခြင်းမပြုမီအခြေခံအဆင့်ဆင့်ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးတက်သောမြင့်ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကွောငျးကိုကင်းသုံးစွဲမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတင်းမာမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (97) ။ အလားတူရလာဒ်များ (စိတ်ကြွဆေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ98) နှင့်ဘိန်းဖြူ (99) ။6ခွင့်ပြုခဲ့ကြွက်များ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ် 23 မှဇ access ကို ဘိန်းဖြူမှဇ access ကိုလည်းဘိန်းဖြူစားသုံးမှုအတွက်တိုး paralleled ကြောင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းအချိန်-မှီခိုတိုး (ပုံပြသ (Figure6) .6) ။ နီကိုတင်းစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုနှင့်အတူဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းအပြိုင်တိုးအလားတူရလာဒ်များ (နီကိုတင်းထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ100).
(က) ICSS ဆုလာဘ်တံခါးများနှင့်ကင်းစားသုံးမှုတင်းမာမှုအတွက်မြင့်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး (လက်ဝဲ) ။ အခြေခံတုံ့ပြန်မှု latency ထံမှရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲ (3 ဇနှင့် 17-22 တစ်ခုချင်းစီကို Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုအပြီးတွင်ဇ; ပထမဦးဆုံးအဒေတာအချက်ညွှန်ပြ ...
စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောစစ်ကူ Associated (အတွင်းမှာပဲ-စနစ် Neuroadaptations) အတွက်ဦးနှောက်ဆုကြေးစနစ်အလွှာ
အဆိုပါ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်နာတာရှည်ယားယံခြင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, စိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှု [ဆိုလိုသည်မှာ hyperkatifeia အပါအဝင်လူသားများတွင်ငွေထုတ်၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုင်းဘုတ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်; (101သဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏)], အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia နှင့်အရှုံး။ ဒါဟာအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောဆွဲဆောင်မှု, စွဲဖို့အကူးအပြောင်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, ဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးအလားတူအပြောင်းအလဲများကို (ယာယီအရင်အဦးနေရာကြောင်းပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်97-99) ။ ထိုသို့သောလူတန်းစားဆုတ်ခွာ electrophysiological အသံသွင်းခြင်းဖြင့်ထင်ဟပ်သည့် mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်နှင့် Vivo အတွက် microdialysis [(102-104); ဂဏန်း Figure77].
(က) ဘယ်ဘက် panel ကိုအီသနော-ဆုတ်ခွာကြွက်များအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာ extracellular dopamine ပြင်းအားအပေါ်အီသနောဆုတ်ခွာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသထားတယ်။ အဆိုပါအလယ်တန်းနှင့်ညာဘက်ပြား antidromically ဖော်ထုတ် ventral ၏အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုပြသ ...
ဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence စဉ်အတွင်းစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းရလဒ်များကို generated ပါပြီ။ dopamine: D အတွက်လျှောက်လျော့နည်းရှိပါတယ်2 (hypodopaminergic လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထင်ဟပ်ဖို့တွေးဆ) receptors, dopamine စိန်ခေါ်မှုမှ hyporesponsiveness (105), နှင့် orbitofrontal-infralimbic cortex စနစ်၏ hypoactivity (105) ။ ဤရွေ့ကား presynaptic လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ် postsynaptic အဲဒီ receptor plasticity ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအတွင်း-system ကို neuroadaptations ဖြစ်တွေးဆနေကြပါတယ်။
နာတာရှည်အရက်အုပ်ချုပ်ရေးဆက်စပ်မှာတော့မျိုးစုံမော်လီကျူးယန္တရားများအတွင်း-system ကို neuroadaptations ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းအီသနော၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုတန်ပြန်ဖို့တွေးဆခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်အီသနောဖြစ်နိုင်သည်α၏ downregulation မှတဆင့်γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) အဲဒီ receptor function ကိုလျော့နည်းစေ1 subunit (106, 107) ။ နာတာရှည်အီသနောလည်း [ဆိုလိုသည်မှာသည်းခံအီသနောတို့က adenosine ၏တားစီးဖို့ဖွံ့ဖြိုး adenosine reuptake ၏စူးရှသောတားစီးလျော့ကျ; (108)] ။ စူးရှသောအီသနော adenylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်သော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပစ္စုပ္ပန်ကျမ်းကိုပိုမိုသက်ဆိုင်ရာ, နာတာရှည်အီသနောထံမှဆုတ်ခွာခြင်း (amygdala အတွက် CREB phosphorylation လျော့ကျခြင်းနှင့် NPY ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်လျော့ကျဆက်စပ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုစူးရှသောအီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိနေသည်109, 110).
(အကြားတွင်-စနစ် Neuroadaptations) စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောစစ်ကူ Associated အဘို့အဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်အလွှာ
arousal-စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက် neurochemical စနစ်များကို (ထိုအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်ရှိနေခြင်းကိုကျော်လွှားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းပုံမှန် function ကို restore လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏ neurocircuitry အတွင်းစေ့စပ်ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြ18) ။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးနှင့် CRF ကကမကထပြုခဲ့ extrahypothalamic ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကနှစ်ဦးစလုံးစူးရှသောကာလအတွင်းမွငျ့မား adrenocorticotropic ဟော်မုန်း၏ဘုံတုံ့ပြန်မှု, corticosterone နှင့် CRF amygdala, မှီခိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာနှင့်အတူအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် dysregulated နေကြတယ် ဆုတ်ခွာ (24, 69, 111-116) ။ အမှန်မှာထို HPA တုံ့ပြန်မှု activation နောက်ဆုံးမှာ extrahypothalamic CRF စနစ်များ ( "sensitizes" အဲဒီအလွန်အကျွံမူးယစ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်ကာအစောပိုင်း dysregulation ဖြစ်နိုင်သည်33, 92).
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, dopamine အလွန်အကျွံလွှတ်ပေးရန်နှင့် opioid peptides dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလျော့ချဖို့နောက်ကျောအစာကျွေးဖို့တွေးဆထားပြီးဖြစ်သော dynorphin စနစ်များ, ၏နောက်ဆက်တွဲ activation ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လည်းကင်းမှီခို (နဲ့အတူဆက်စပ် dysphoric syndrome ရောဂါအထောက်အကူပြု48) ။ Dynorphins (တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအတွက်ဆန္ဒရှိ dysphoric ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆခဲ့ကြ42-45).
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence မှတစ်ဘုံတုံ့ပြန်မှု CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ CRF အဲဒီ receptor ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္နှင့်ကာကွယ်ရေးမွှေးစမ်းသပ်မှု, (တစ် anxiogenic ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်117, 118) ။ Opioid မှီခိုလည်း (CRF အဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်နေကြသည်စိတ်တိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်119, 120) ။ အီသနောဆုတ်ခွာ CRF ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုထုတ်လုပ်1/ CRF2 peptidergic ရန် (121) နှင့်အသေးစား-မော်လီကျူး CRF1 ရန် (122-124) နှင့်တစ်ဦး peptidergic CRF ၏ intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 အဆိုပါ amygdala သို့ရန် (125) ။ ထို့ကြောင့် CRF ရန်အချို့ကိုသက်ရောက်မှုကို (CeA မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီ125) ။ နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာ (စ CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်77, 126) ။ intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်း CRF ရန်လည်း (နာတာရှည်အီသနောထံမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားဖို့ potentiated စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့127-131).
တိရစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ၏နောက်ထပ်အတိုင်းအတာတိရိစ္ဆာန်များယခင်ကတစ်ဦးဆန္ဒရှိပြည်နယ်နှင့်အတူတွဲကာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောင်ရှားရသောအခြေအနေများအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖြစ်ပါသည်။ ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုတိုင်းတာရန်အသုံးပြု opioids များ၏အခြေအနေတွင်အဓိကအားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြရသောအခါဤသို့သောရာအရပျဆန္ဒရှိ, (132, 133) ။ တစ်ဦး CRF ၏ system administrator1 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်တစ်ဦး peptide CRF တိုက်ရိုက် intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန်လည်း (opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိလျော့နည်းသွား134-136) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများတိုးချဲ့ amygdala အတွက်လုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရွေးချယ် CRF1 ရန် antalarmin (မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင် naloxone ထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့134), အ CeA သို့ထိုးသွင်းကာ CRF peptide ရန်လည်း (ထို CeA သို့ထိုးသွင်း methylnaloxonium ထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြောင်းပြန်135) ။ CRF1 နောက်ကောက်ကြွက် (opioid ဆုတ်ခွာဖို့အခွအေနေအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြသရန်ပျက်ကွက်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် mRNA dynorphin အတွက် opioid-သွေးဆောင်တိုးပြသရန်ပျက်ကွက်136).
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအတွက် CRF-သွေးဆောင်တိုးအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှပံ့ပိုးအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိပြီးသောအယူအဆ၏တစ်ဦးကဆွဲဆောင်မှုစမ်းသပ် CRF ရန်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းမြင့် reverse နိုငျသောလေ့လာရေးပါပဲ။ ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းနီကိုတင်းနှင့်အရက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်မြင့်တက် (က CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့ကြသည်137, 138) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကို (CeA နှင့်နျူကလိယနှစ်ဦးစလုံး shell ကို accumbens မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီ139).
Enhanced dynorphin အရေးယူမှု (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dysphoric ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုဖို့စိတ်ကျရောဂါ-လိုပဲဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆနေပါတယ်49, 56, 57, 140-145) ။ ဥပမာ, κ-opioid အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူ pretreatment (စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် analgesia နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် immobility ပိတ်ဆို့57) သည်, မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္နှင့်ပွင့်လင်းသောလယ်၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွား (ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အတွက် conditional ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ယုတ်လျော့145ကိုကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်) နှင့်ပိတ်ဆို့ခံရစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ (140).
ဖျန်ဖြေမူးယစ်ဆေးတိုးချဲ့ Access ကိုအတူရိုက်ယူခြင်းကြောင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုအလွှာ
Corticotropin-releasing အချက်, compulsive ကဲ့သို့မူးယစ်ရှာ, နှင့်တိုးချဲ့ amygdala
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏တူသော-anxiogenic နှင့်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ CRF ရန်များ၏စွမ်းရည်ကိုမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် CRF ရန်၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ CRF ရန်ရွေးချယ်ကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့146), နီကိုတင်း (77) နှင့်ဘိန်းဖြူ [(147); ဂဏန်း Figure8] .8] ။ တစ်ဦး CRF ၏ဥပမာအားဖြင့်, စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု1 ရန် 23 (Extended-access ကိုအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နီကိုတင်း၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ ဇ) တိရိစ္ဆာန်များ (77).
CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1 compulsive ကဲ့သို့မူးယစ်ထပ်တိုးခွင့် (က) နဲ့ကြွက်များတွင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တုံ့ပြန်အပေါ်ရန်။ အဆိုပါ CRF ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု1 မှီခိုနှင့် Non-မှီခိုကြွက်များတွင်အရက်၏အော်ပရေတာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အဲဒီ receptor ရန် MPZP ။ စမ်းသပ်ခြင်း ...
Corticotropin-releasing အချက်ရန်လည်းမှီခိုကြွက်များတွင်အီသနောဒတိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ [(124); ဂဏန်း Figure8] .8] ။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်အီသနောငွေ့၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာမှထိတွေ့မှုစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးထုတ်လုပ် [2 ရက်သတ္တပတ် Post-စူးရှဆုတ်ခွာ; (76, 148)] ။ တစ်ဦး CRF ၏ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန် (စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့149) ။ သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး CRF ၏စနစ်ထိုး1 ရန်လည်းစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုပိတ်ဆို့ (124) နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (150) ။ အဆိုပါ CeA တစ် CRF သို့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ1/ CRF2 အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်ရန်ပိတ်ဆို့အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (151) ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများ CeA အတွင်း GABAergic interneurons အပေါ် CRF ၏လုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာများနှင့်မှီခိုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းနာတာရှည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ CRF ရန် (compulsive ကဲ့သို့အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိတ်ဆို့116) ။ စုစုပေါင်းဤရလဒ်များ Basal forebrain အတွက် CRF ကိုလည်းတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံကိုကင်း, ဘိန်းဖြူ, နီကိုတင်းနှင့်အရက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်မောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Dynorphin, compulsive ကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်နှင့်တိုးချဲ့ amygdala
မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအ dynorphin-κ opioid system ကိုလည်းတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်များနှင့်မှီခိုနှင့်အတူ (စိတ်ကြွဆေး, ဘိန်းဖြူနှင့်အရက်) တုံ့ပြန် compulsive ကဲ့သို့မူးယစ် mediates ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေသက်သေအထောက်အထား (ရန်κသေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူးရွေးချယ်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းများအတွက်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ပိတ်ဆို့ပြသခဲ့သည်152) ။ ပို. ပင်ဆွဲဆောင်မှု (အလွန်အကျွံမူးယစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းκရန်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ152-155) နှင့် (အနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ156) ။ သို့သော်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူစိတ်ကြွဆေးစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုအပေါ် dynorphin-κ opioid စနစ်၏ activation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေမှာပါဝင်နေတဲ့ neurobiological ဆားကစ်, အမည်မသိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
NPY, compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ, နှင့်တိုးချဲ့ amgydala
Neuropeptide Y ကိုမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများမှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောသိသိသာသာ anxiolytic ကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦး neuropeptide ပေမယ်အကြီးအကျယ်အဆိုပါ amygdala innervating ။ ဒါဟာ (အလွဲသုံးစားမှုနှင့် NPY function ကိုထိုသို့သောတိုးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်အတွက် CRF မှဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ CRF အတွက်တိုး၏လုပ်ရပ်များမှအတိုက်အခံလုပျဆောငျစေခြင်းငှါရှိသည်ဖို့တွေးဆနေပါတယ်157) ။ သိသာထင်ရှားသောအထောက်အထား CeA အတွက် NPY ၏ activation နာတာရှည်အီသနောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှီခိုမှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY (အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့158, 159) ။ NPY လည်း (အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အလွန်အကျွံအရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းသွား160) ။ တိုက်ရိုက် CeA သို့ NPY ၏ injection (161အဆိုပါ CeA အတွက် NPY ၏) နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-တိုးမြှင်စကားရပ်တွင် (အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့162) ။ CRF ကဲ့သို့ဆယ်လူလာအဆငျ့, NPY မှာ1 ရန်, လုပ်ကွက်ဟာအီသနောထုတ်လုပ်သည့် CeA အတွက်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးနှင့်လည်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါနာတာရှည်လုပ်ကွက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအလွန်အကျွံသောက်သုံးရန်အကူးအပြောင်း (163) ။ အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏လုပ်ရပ်များအတွက် NPY ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအထူးသဖြင့်မှီခိုနှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှငျ့ ပတျသကျ. , ကန့်သတ်သည်။ NPY5 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် (ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတုံးတုံ့ပြန်မှုများ164, 165), နှင့် NPY နောက်ကောက်ကြွက် (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ hypersensitivity ပြသ166) ။ NPY သူ့ဟာသူ (ကန့်သတ်-access ကိုကြွက်များတွင်ရှာကြံ intracerebroventricularly facilitated ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘိန်းဖြူ၏သွေးဆောင် reinstatement ထိုးသွင်း167, 168) ။ တစ်ဦး NPY Y ကို2 ရန်, ဖြစ်နိုင်သည် NPY လွှတ်ပေးရန် presynaptically သရုပ်ဆောင်, (နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်ပိတ်ဆို့169), နှင့် NPY intracerebroventricularly (ထို somatic ဆိုင်းဘုတ်များပိတ်ဆို့ပေမယ့်နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်လိုငွေပြမှုဆုချမပေးထိုးသွင်း170) ။ သို့သော်တိုးချဲ့-access ကိုအတူရှာကြံ compulsive မူးယစ်ဆေးအတွက် NPY ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာခဲ့ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီမှာအယူအဆ NPY တစ်ဦးကြားခံသို့မဟုတ် homeostasis ဖို့ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များကိုပြန်လာနိုင်မအကြား-system ကို neuroadaptations မှ homeostatic တုံ့ပြန်မှု (ကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ်157, 171).
Corticotropin-releasing အချက်, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်တိုကျရိုကျ cortex
သက်သေအထောက်အထားများ၏ဆုံလိုင်းများအတွက် CeA ၏ medial PFC (mPFC) သိမြင်မှု function ကိုနှင့် overactivation ၏ချို့ယွင်း (compulsive ကဲ့သို့တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်တုံ့ပြန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြု172-174) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကင်းချုပ်ရာပြီးနောက်လပေါင်းများစွာကြာမြင့်ကြောင်း dorsomedial PFC (dmPFC) အာရုံခံ (များ၏သိပ်သည်းဆတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် memory နဲ့ကျဆင်းခြင်းတစ်ခုချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်ကင်းစားသုံးမှု၏တစ်ဦးဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပုံစံသွေးဆောင်172) ။ LgA နှင့် Sha ကြွက်အနိမ့်သိမြင်ဝယ်လိုအား (နှောင့်နှေးအောက်ရှိနှောင့်နှေး Non-ကိုက်ညီခြင်း-to-နမူနာတာဝန်အတွက်မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြသွားရမည်အကြောင်း < 10 s ကို), 10 နှင့် 70 မှ 130 ကနေနှောင့်နှေးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်) အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်၏စွမ်းရည်န့်သတ်ချက်မှဆိုလိုသည်မှာနီးစပ်ခြင်း (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ဝန်တိုးမြှင့် s ကို LgA ကြွက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထို့အပွငျကိုကင်းစားသုံးမှု၏တင်းမာမှုများ၏ပြင်းအားအဆိုးကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးသရုပ်ပြခြင်း, 70-s ကိုနှောင့်နှေးနှင့်အတူသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 130- နှင့် 10-s ကိုနှောင့်နှေးနှင့်အတူ Sha နှင့် LgA ကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်အလုပ်လုပ်သော်လည်းမဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် ကိုကင်းစားသုံးမှုနှင့်ဤတာဝန်အတွက်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏တင်းမာမှုမြင့်မားသိမြင်ဝယ်လိုအားအောက်မှာမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ dmPFC အတွက်အာရုံခံခြင်းနှင့် oligodendrocytes ၏သိပ်သည်းဆအပြုသဘောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်အလုပ်လုပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ dmPFC အတွက်အာရုံခံသို့မဟုတ် oligodendrocytes ၏တစ်ဦးကနိမ့်သိပ်သည်းဆကိုပိုမိုပြင်းထန်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းစက်လှေကားမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပြီးနောက် OFC ကိုပြောင်းလဲမှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုအလုပ်လုပ်တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုသည် orbitofrontal cortex (OFC) တွင် oligodendrocytes ၏သိပ်သည်းဆဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမဆက်စပ် OFC အာရုံခံ dmPFC အာရုံခံထက်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှု၏ deleterious ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းအားနည်းချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည် OFC အတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အာရုံခံသိပ်သည်းဆအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် PFC ကမောက်ကမဖြစ်မှု compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ထိန်းချုပ်မှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဖို့တိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။
အလားတူရလာဒ်များပင်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေ့တော်၌, Bing အရက်သုံးစွဲမှု၏တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ 24 ကြွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပေးသနားထားတဲ့အတွက်အရက်မှနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို, (နှင့်အတူအရက်စားသုံးမှု၏တင်းမာမှု၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း တစ်နေ့လျှင်ဇ,7တစ်ပတ်ကိုရက်ပေါင်း) သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း (3 တစ်ပတ်ကိုရက်) အရက်သေစာမှဝင်ရောက်ခွင့် (20% v / v) နှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး, FBJ murine osteosarcoma ဗိုင်းရပ်စ် oncogene homolog (Fos) ကို mPFC, CeA, hippocampus အတွက်စကားရပ်များနှင့်နျူကလိယ accumbens အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူတိုင်းတာနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (175) ။ အရက်စားသုံးမှု၏တင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်အရက်ထဲကနေ Abstinence အထူး mPFC အတွက်ဂါဘမြို့သားများနှင့် CRF အာရုံခံစုဆောင်းနှင့်စူးရှစဉ်အတွင်းအလွန်အကျွံအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ် (24-72 ဇ) သော်လည်းမ (16-68 ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ ရက်ပေါင်း) abstinence ။ အရက်ကနေ abstinence တစ် mPFC နှင့် CeA ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အဆက်ဖြုတ်ပေမယ့် mPFC သို့မဟုတ်နျူကလိယမဟုတ် accumbens နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် mPFC interneurons ၏ dysregulation အတွက် neuroadaptation ၏အစောပိုင်းအညွှန်းကိန်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုသည် PFC CeA လမ်းကြောင်း၏ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အဆက်ဖြုတ်စဉ်အတွင်း mPFC အတွက်ဂါဘမြို့သားများနှင့် CRF အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၏စုဆောင်းမှုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကျော်ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အရေးပါဖြစ်မည်အကြောင်းပြသ အရက်မှီခို။
စွဲလမ်းမှုအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ: An Allostatic ကြည့်ရန်
ပို. အရေးကြီးသည်ပစ္စုပ္ပန်စာတမ်းအဘို့, မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော CRF နှင့် dynorphin အဖြစ်ဦးနှောက် Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များသည်, တိုးချဲ့ amygdala အတွက်စုဆောင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့အလွန်အကျွံမူးယစ်ဆည်းပူးနေတဲ့ကြားက-system ကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုပါဝင်သည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်း activated ခံရဖို့လူသိများသောဤဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု neurotransmitter ကြောင်း hypothesize, အခါစူးရှနှင့်ဆက်စပ်ဖယ်ရှားပြီး, ထုတ်လုပ်စိုးရိမ်စိတ်, hyperkatifeia နဲ့စိတ်တိုတာတွေလက္ခဏာတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးဒီ activation ထငျရှား နှင့် abstinence ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ။ အထူးသသို့သော်အဲဒီမှာ CRF immunoreactivity ၏အထောက်အထားများအ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဖြစ်တယ်, တစ်ဦး CRF1 အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းအဲဒီ receptor ရန် (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တင်းမာမှုပိတ်ဆို့176) ။ စုစုပေါင်းဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်မူလက Carlezon နှင့် Nestler (ဖွငျ့ dynorphin များအတွက်တွေးဆခဲ့အကြား-system ကို / အတွင်း-system ကို neuroadaptations အကြံပြု177), အရာအတွက်အလွန်အကျွံ dopamine နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် opioid peptide အဲဒီ receptor activation အားဖြင့် CREB ၏ activation dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖိနှိပ်ပြန်ကျွေးဖို့ dynorphin ၏ induction အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ (Anti-ဆုလာဘ်ဆားကစ်များအကြား-system ကို neuroadaptations အဖြစ်စုဆောင်းကြသည် hypothesize178) စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်နှင့်ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ပြည်နယ်များထုတ်လုပ်ရန် (179-181) နှစ်ခုယန္တရားများမှတဆင့်: အတိုးချဲ့ amygdala (CRF) တွင်စိတ်ဖိစီးမှု-ကဲ့သို့ကွောကျမကျနဲ့တူပြည်နယ်များတိုက်ရိုက် activation နှင့် dopamine (dynorphin) ဖိနှိပ်ကစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောပြည်နယ်၏သွယ်ဝိုက် activation ။
မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာတစ်ဦးကဝေဖန်ပြဿနာတစ်ဦးချင်းစီစူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရှည်လျားတာ compulsive မူးယစ်ဆေးမှပြန်လာစွဲသောနာတာရှည် relapse ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကမှကိုက်ညီ အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်စွဲသံသရာ၏စင်မြင့်။ Koob နှင့် Le Moal လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" ပါဝင်သော dysregulations drug- ကိုသက်ဝင်နေဖြင့် "တဏှာ" cue- နှင့်ယခုဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement neurocircuits မှအားနည်းချက်များအတွက်သေံတင်ထားရန်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence ကာလအတွင်းဆက်လက်ရှိကြောင်းတွေးဆ တစ်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် hypofunctioning prefrontal စနစ်ဖြင့်မောင်းနှင်။ အဆိုပါတွေးဆ allostatic, dysregulated ဆုလာဘ်များနှင့်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုပြည်နယ်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးလက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အရာမူးယစ် Prime အားဖြင့်အခြေခံသည်မူးယစ်ဆေးတွေကိုနှင့်စူးရှသောဖိအားမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ (ထုတ်ယူနိုင်ရန် ပို. ပင်တန်ခိုးအားဆည်းပူး92) ။ ထို့ကြောင့် Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များဆုလာဘ်စနစ်က function ကိုနှင့်စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းများ၏ပေါင်းစပ် compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်စွဲကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တဲ့အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်ပေးပါသည်။ တစ်ဦးကဆွဲဆောင်မှုအငြင်းအခုံဟာ CRF စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကအမှန်ပင်ယခင်က PFC အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုလုပ်ရပ်များကနေတစ်ဆင့်ထင်တာအစောပိုင်းကစတင်နိုင်ပါသည်ပညတ်သော neuroplasticity ကြောင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါခြုံငုံအယူအဆရေးရာဆောင်ပုဒ်ကဒီမှာငြင်းခုံမူးယစ်ဆေးစွဲဆုလာဘ်များနှင့်ဖိအားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုန့်ပြန်ထိန်းညှိကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ခုအလွန်အကျွံနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါမက်လုံးပေး salience စနစ်များ၏ dysregulation (မူးယစ်ဆေးဝါး၏ပထမဦးဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်182), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး၏ dysregulation dynorphin ၏ activation ဖို့တိုးချဲ့ amygdala အတွက် CRF ၏ activation ဖို့ PFC အတွက် HPA ဝင်ရိုး၏ activation ထံမှ CRF ၏ activation ရန်, ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်အဆငျ့ဆငျ့ထွက်လာပါတယ်, အမူးရူးနှင့်နောက်ဆက်တွဲစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည် အဆိုပါ ventral striatum (ပုံထဲမှာ (Figure9) .9) ။ စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး၏ overactivation ၏ဤအဆငျ့ဆငျ့ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးယာယီ homeostatic dysregulation ထက်ပိုမိုကိုယ်စားပြု; ဒါကြောင့်လည်းချေါသည့်ပြောင်းလဲနေသော homeostatic dysregulation ကိုယ်စားပြုတယ် allostasis.
"အတွင်း-system ကို" ဟုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့၏ပုံကြမ်းများနှင့်အတွင်း "သည်မှောင်မိုက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသော" အကြား-system ကို "အပြောင်းအလဲmesolimbic dopamine ကနေအဓိကပံ့ပိုးမှုများနှင့် opioid peptides နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးအကျိုးသည်။ "(ထိပ်တန်း) Circuitry ...
ထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအဖြစ်ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိန်ခေါ်မှုများ, တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်မှာဖို့, မော်လီကျူးဆယ်လူလာနှင့် neurocircuitry အဆင့်ဆင့်မှာဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကြိုးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်မူဘောင်, ဒီမှာဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက်ကျန်နေတဲ့ကျဆင်းခြင်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ရန်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကို Activation တစ်ခုချေါဖြစ်ပါတယ် allostatic ပြည်နယ် (15) ။ ဤသည်ပြည်နယ် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှစ်ဦးစလုံးရာ၏, ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ function ကိုလျော့နည်းသွား Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များစုဆောင်းမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲနာတာရှည်ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဘယ်လိုကဤစနစ်များစိတ်ခံစားမှု valence သိရှိစေရန်ရှိရာ ventral striatum နှင့်တိုးချဲ့ amygdala စီမံကိန်းသည် Basal forebrain မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသည်အခြားလူသိများသောဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များအားဖြင့် modulated နေကြသည်, ထိုသိမြင်ဒိုမိန်းအတွက်ဘယ်လိုတိုကျရိုကျ cortex dysregulations အဆိုပါ dysregulation အထောက်အကူပြုရန်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala နှင့်မည်ကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤဆားကစ်ပေါ်မှာတင်သိရှိစေရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏မော်လီကျူး-မျိုးရိုးဗီဇအဆင့်မှာကွာခြား၏အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်စိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူသူတို့၏အကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Arends နှင့် Mellany ဆန်းတို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သုတေသနအမျိုးသား Institute မှကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေအရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်, DA006420, DA020608, DA012602 နှင့် DA008459 ထံမှ AA010072, AA004043, AA023597 နှင့် AA004398 ပေးအပ်နှင့် DK26741 ကထောက်ခံခဲ့သည် ဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive နှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများ။ သုတေသနမှာလည်းအရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများအတွက် Pearson ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 24002 ဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ (1997) 278: 52-8.10.1126 / science.278.5335.52 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2 ။ ကြားရှိ J ကို, septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် Milner P. အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ J ကို comp Physiol Psychol (1954) 47: 419-27.10.1037 / h0058775 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
3 ။ Koob gf, တောင်ပံကစားသမား GD, Meyerhoff JL, forebrain နှင့်ဦးနှောက်ကို stem loci ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ Self-stimulation အပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏ Annau Z. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res (1977) 137: 109-26.10.1016 / 0006-8993 (77) 91015-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
4 ။ ကားရှိမုနျ H ကို, Stinus L ကို, et al Tassin JP, Lavielle S က, Blanc, G, Thierry လေး။ intracranial Self-stimulation များအတွက်လိုအပ်သော dopaminergic mesocorticolimbic စနစ်တစ်ခုဖြစ်သနည်း A10 ဆဲလ်အသေကောင်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းကနေထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့အမူအကျင့်လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Biol (1979) 27: 125-45.10.1016 / S0163-1047 (79) 91745-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Kornetsky ကို C, Esposito ru ။ Euphorigenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ: ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဗဟိုဘဏ် proc (1979) 38: 2473-6 ။ [PubMed]
6 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Hamdani S က, Rajabi H ကို, Conover K ကို Stewart က J ကို, Arvanitogiannis တစ်ဦးက, et al ။ ကြွက် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအကြိုးဆွ: neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ။ ပြုမူနေ neuroscience (2006) 120: 888-904.10.1037 / 0735-7044.120.4.888 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7 ။ Garry PA ဆိုပြီး, Kilpatrick M က, Bunin MA, မိုက်ကယ်: D, Walker က QD, Wightman RM ။ intracranial Self-stimulation ထံမှနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး Dissociation ။ သဘာဝတရား (1999) 398: 67-9.10.1038 / 18019 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
8 ။ Miliaressis အီး, Emond ကို C, Vivo microdialysis အတွက်သုံးပြီး intracranial Self-stimulation အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏ Merali Z. Re-အကဲဖြတ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (1991) 46: 43-8.10.1016 / S0166-4328 (05) 80095-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ဗြာ (1993) 18: 247-91.10.1016 / 0165-0173 (93) 90013-P ကို ​​[PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10 ။ Robbins TW ။ ဆုလာဘ်-တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးကျပုံစံသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ သဘာဝတရား (1976) 264: 57-9.10.1038 / 264057a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
11 ။ Miliaressis E ကို, အ medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏က Le Moal အမ်စိတ်ကြွဆေး: ယင်း၏ကြိုး၏အမူအကျင့် dissociation နှင့်သက်ဝင်ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience လက်တ (1976) 2: 295-300.10.1016 / 0304-3940 (76) 90163-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Farrar တစ်ဦးက, Mingote သည် SM ။ နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) (2007) 191: 461-82.10.1007 / s00213-006-0668-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ သည် Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ် Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ဗြာ (1991) 71: 155-234 ။ [PubMed]
14 ။ Robbins TW, Everitt BJ ။ activation အတွက် mesencephalic dopamine တစ်အခန်းကဏ္ဍ: Berridge (2006) အပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်။ Psychopharmacology (Berl) (2007) 191: 433-7.10.1007 / s00213-006-0528-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology (2001) 24: 97-129.10.1016 / S0893-133X (00) 00195-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology: ရောဂါများအတွက်သက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး neuroadaptational အမြင်။ စွဲလမ်း (2006) 101: 23-30.10.1111 / j.1360-0443.2006.01586.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience (2005) 8: 1445-9.10.1038 / nn1578 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ (2008) 59: 11-34.10.1016 / j.neuron.2008.06.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ Sidhpura N ကို, Parsons LH ။ Endocannabinoid-mediated Synaptic plasticity နှင့်စွဲ-related အပြုအမူ။ Neuropharmacology (2011) 61: 1070-87.10.1016 / j.neuropharm.2011.05.034 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
20 ။ စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Heilig အမ်အဆိုပါ NPY စနစ်။ Neuropeptides (2004) 38: 213-24.10.1016 / j.npep.2004.05.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21 ။ Rainnie DG, Bergeron R ကို, Sajdyk တီဂျေ, Patil က M, Gehlert DR, Shekhar အေ Corticotrophin အဆိုပါ amygdala အတွက်အချက်-သွေးဆောင် Synaptic plasticity လွှတ်စိတ်ခံစားမှုမမှန်သို့စိတ်ဖိစီးမှုဘာသာပြန်ပေးသည်။ J ကို neuroscience (2004) 24: 3471-9.10.1523 / JNEUROSCI.5740-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
22 ။ Lemos JC, Wanat MJ, Smith က JS, Reyes BA, Hollon Ng, ဗန် Bockstaele EJ, et al ။ ပြင်းထန်ဖိစီးခြင်းကိုမနှစ်သက်မှအစာစားချင်စိတ်ကနေနျူကလိယ accumbens အတွက် CRF အရေးယူ switches ။ သဘာဝတရား (2012) 490: 402-6.10.1038 / nature11436 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23 ။ Dunn AJ, Berridge CW ။ corticotropin-releasing အချက်အုပ်ချုပ်ရေးမှဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: CRF စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအာမခံပါသလဲ ဦးနှောက် Res ဗြာ (1990) 15: 71-100.10.1016 / 0165-0173 (90) 90012-D ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
24 ။ Koob gf, Heinrich SC, Menzaghi က F, Pich EM, Britton KT ။ Corticotropin အချက်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပြုအမူလွှတ်။ seminal neuroscience (1994) 6: 221-9.10.1006 / smns.1994.1029 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25 ။ Koob gf, Bartfai T က, Roberts သည် AJ ။ corticotropin-releasing အချက်များ၏ neuropharmacology အတွက်မော်လီကျူးဗီဇချဉ်းကပ်မှုများအသုံးပြုမှု။ int J ကို comp Psychol (2001) 14: 90-110 ။
26 ။ Sarnyai Z ကို, Shaham Y ကို, Heinrich SC ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Pharmacol ဗြာ (2001) 53: 209-43 ။ [PubMed]
27 ။ Koob gf, Heinrich SC ။ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက် corticotropin-releasing အချက်နှင့် urocortin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Res (1999) 848: 141-52.10.1016 / S0006-8993 (99) 01991-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
28 ။ Spina M က, et al Merlo-Pich အီးချမ်း RKW, Basso လေး, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က။ urocortin ၏အစာစားချင်စိတ်-နှိပ်ကွပ်သက်ရောက်မှုတစ်ခု CRF-related neuropeptide ။ သိပ္ပံ (1996) 273: 1561-4.10.1126 / science.273.5281.1561 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
29 ။ Pelleymounter MA, ယုပ္ပေ M က, Carmouche M က, Cullen က MJ, Brown က B, Murphy က B, et al ။ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အခန်းက္ပ CRF အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါလာဖို့ syndrome ရောဂါအတွက် receptors ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2000) 293: 799-806 ။ [PubMed]
30 ။ Takahashi LK, Ho SP, Livanov V ကို, Graciani N ကို, Arneric SP ။ CRF ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း2 receptors စိုးရိမ်စိတ်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် anxiolytic အပြုအမူထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res (2001) 902: 135-42.10.1016 / S0006-8993 (01) 02405-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
31 ။ Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ဒဗလျူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ovine corticotropin-releasing အချက် immunoreactive ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်များ၏အဖွဲ့အစည်းက: တစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု။ Neuroendocrinology (1983) 36: 165-86.10.1159 / 000123454 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
32 ။ Turnbull AV စနစ်, Rivier C. Corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ endocrine တုံ့ပြန်မှု: CRF receptors, စည်းနှောင်ပရိုတိန်းနှင့်ဆက်စပ် peptides ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1997) 215: 1-10 ။ [PubMed]
33 ။ Koob gf, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 164: 1149-59.10.1176 / appi.ajp.2007.05030503 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34 ။ Heimer L ကို, Alheid G. အ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing ။ ခုနှစ်တွင်: Napier TC, Kalivas PW, Hanin ငါအယ်ဒီတာများ။ အယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Forebrain: ခန္ဓာဗေဒ (စီးရီးခေါင်းစဉ်ကို function မှ: စမ်းသပ်ဆေးပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှင့်ဇီဝဗေဒ (Vol 295), New York က: ။ ။ Plenum စာနယ်ဇင်း; (1991) p 1-42 ။ ။
35 ။ Alheid gf, De Olmos JS, Beltramino CA. Amygdala နှင့်တိုးချဲ့ amygdala ။ ခုနှစ်တွင်: Paxinos, G, အယ်ဒီတာ။ အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Rat အာရုံကြောစနစ်။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; (1995) ။ စ။ 495-578 ။
36 ။ Maier SF, Watkins LR ။ ဖိအားထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အကူအညီမဲ့သင်ယူ: အ dorsal raphe နျူကလိယ, serotonin, နှင့် corticotropin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2005) 29: 829-41.10.1016 / j.neubiorev.2005.03.021 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
37 ။ စုပ် KS, Walker က DL, Freeman က SM, Flandreau EI, Ressler KJ, အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိစိုးရိမ်စိတ်ပေါ်တွင် stria terminalis ၏အိပ်ရာအခွခေံအုအတွင်းအချက်စကားရပ်လွှတ်စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရန် corticotropin ၏ Davis ကအမ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) 18: 308-19.10.1038 / mp.2011.188 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
38 ။ Neugebauer V ကိုလီ W က, ငှက် GC, ဟန် JS ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဇွဲနာကျင်မှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် (2004) 10: 221-34.10.1177 / 1073858403261077 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
39 ။ Chavkin ကို C, ယာကုပ်လျှင်, တိန်းအေ Dynorphin အဆိုပါκ opioid အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် endogenous ligand ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ (1982) 215: 413-5.10.1126 / science.6120570 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
40 ။ Watson ဟာ SJ, Khachaturian H ကို, Akil H ကို, Coy DH, ဦးနှောက်ထဲမှာ dynorphin စနစ်များနှင့် enkephalin စနစ်များ၏ဖြန့်ဖြူး၏တိန်းအေနှိုင်းယှဉ်။ သိပ္ပံ (1982) 218: 1134-6.10.1126 / science.6128790 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
41 ။ Fallon JH, Leslie FM ရေ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dynorphin နှင့် enkephalin peptides ၏ဖြန့်ဝေ။ J ကို comp Neurol (1986) 249: 293-336.10.1002 / cne.902490302 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 ။ Shippenberg TS, Zapata တစ်ဦးက, Chefer VI ကို။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ Pharmacol Ther (2007) 116: 306-21.10.1016 / j.pharmthera.2007.06.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
43 ။ Wee က S, Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် dynorphin-κ opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) (2010) 210: 121-35.10.1007 / s00213-010-1825-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
44 ။ Mucha RF, နေရာနှင့်အရသာ preference ကိုအေးစက်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ Kappa နှင့် mu opioid အဲဒီ receptor agonists ၏ Herz အေလှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychopharmacology (Berl) (1985) 86: 274-80.10.1007 / BF00432213 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
45 ။ Pfeiffer တစ်ဦးက, Brantl V ကို, Herz တစ်ဦးက, Emrich HM ။ Psychotomimesis κ opiate receptors ကကမကထပြုခဲ့။ သိပ္ပံ (1986) 233: 774-6.10.1126 / science.3016896 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
46 ။ Todtenkopf ကြွက်များတွင် intracranial Self-stimulation အပေါ်κ-opioid အဲဒီ receptor ligands ၏က MS, Marcus JF, Portoghese PS, Carlezon WA ။ , ဂျူနီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (2004) 172: 463-70.10.1007 / s00213-003-1680-y က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
47 ။ Pliakas လေး, Carlson RR, Neve RL, Konradi ကို C, Nestler EJ, Carlezon WA ။ , ဂျူနီယာ ALTER တုန့်ပြန်ကင်းရန်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်မြင့်မားသောစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်အတူဆက်စပ်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility တိုးတက်လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience (2001) 21: 7397-403 ။ [PubMed]
48 ။ Nestler EJ ။ သမိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်: opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ (2004) 25: 210-8.10.1016 / j.tips.2004.02.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
49 ။ Mague SD, Pliakas လေး, Todtenkopf က MS, Tomasiewicz HC, Zhang က Y ကို, Stevens WC, Jr. et al ။ ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက်κ-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2003) 305: 323-30.10.1124 / jpet.102.046433 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
50 ။ Knoll ကို AT, Carlezon WA ။ , ဂျူနီယာ Dynorphin, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ။ ဦးနှောက် Res (2010) 1314: 56-73.10.1016 / j.brainres.2009.09.074 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
51 ။ Hjelmstad GO, Fields HL ။ နျူကလီးယပ်အတွက် glutamatergic ဂီယာ၏ Kappa opioid အဲဒီ receptor တားစီး shell ကို accumbens ။ J ကို Neurophysiol (2001) 85: 1153-8 ။ [PubMed]
52 ။ မီးခိုးရောင်လေး, ရောလ်သည် SM, Shippenberg TS, McGinty JF ။ အဆိုပါ Kappa-opioid agonist, ဦး-69593 စူးရှသောစိတ်ကြွဆေး-evoked အပြုအမူတွေနှင့် ventral striatum အတွက် dopamine နဲ့အချိုမှု၏ကယ်လစီယမ်-မှီခို dialysate အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို Neurochem (1999) 73: 1066-74.10.1046 / j.1471-4159.1999.0731066.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
53 ။ Margolis eb, Lock ကို H ကို, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2006) 103: 2938-42.10.1073 / pnas.0511159103 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
54 ။ Tejeda HA ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးချီကာဂို (2009) အတွက်ဒေသခံများနှင့် Ventral Tegmental ဧရိယာ Kappa-Opioid receptor လူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် Prefrontal Cortex အတွက် Extracellular Dopamine ၏ Modulation ။ စိတ္တဇအဘယ်သူမျှမ: 751.7 ။
55 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Platt DM, Rowlett JK, Rüedi-Bettschen: D, Spealman RD ။ opioid နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ယန္တရားများများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ရှာကြံကိုကင်းများ၏ Agonist-သွေးဆောင် reinstatement κ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2007) 323: 525-33.10.1124 / jpet.107.125484 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
56 ။ မြေယာ BB, Bruchas MR, Lemos JC, Xu M က, Melief EJ, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု၏ dysphoric အစိတ်အပိုင်း dynorphin Kappa-opioid စနစ်၏ activation အားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience (2008) 28: 407-14.10.1523 / JNEUROSCI.4458-07.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
57 ။ McLaughlin JP, Marton-Popovici M ကို, Chavkin C. Opioid အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းκနှင့်မျိုးဗီဇပြတ်တောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု prodynorphin ။ J ကို neuroscience (2003) 23: 5674-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ ရှောလမုန်သည် RL, Corbit JD ။ လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: 1 ။ ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychol ဗြာ (1974) 81: 119-45 ။ [PubMed]
59 ။ McEwen BS ။ Allostasis နှင့် allostatic ဝန်: neuropsychopharmacology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology (2000) 22: 108-24.10.1016 / S0893-133X (99) 00129-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
60 ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; (1994) ။
61 ။ Koob gf ။ သီအိုရီမူဘောင်များနှင့်အရက်သေစာစွဲ၏ mechanistic ရှုထောင့်: အရက်စွဲ: အကျိုးကိုလိုငွေပြမှုရောဂါအဖြစ်အရက်စွဲ။ ခုနှစ်တွင်: Sommer WH, Spanagel R ကို, အယ်ဒီတာများ။ အယ်ဒီတာများ။ ။ အမူအကျင့်အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လက်ရှိခေါင်းစဉ်များ (Vol 13), ဘာလင်: အရက်စွဲ (စီးရီးခေါင်းစဉ်၏အမူအကျင့် Neurobiology ။ ။ Springer-Verlag; (2013) p 3-30 [။PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Khantzian EJ ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်း၏ Self-ဆေးဝါးအယူအဆ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအတွက်နှင့်မကြာသေးမီက applications များ။ ဟားဗတ်ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု (1997) 4: 231-44.10.3109 / 10673229709030550 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
63 ။ Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ post-ကင်း anhedonia: ကင်းဆုတ်ခွာ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology (1991) 4: 17-26 ။ [PubMed]
64 ။ Paterson NE, Myers ကို C, Markou အေအကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ်စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုကနေထပ်ခါတလဲလဲဆုတ်ခွာ၏။ Psychopharmacology (Berl) (2000) 152: 440-6.10.1007 / s002130000559 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
65 ။ Schulteis, G, Markou တစ်ဦး, ရွှေ LH, Stinus L ကို, Koob gf ။ opiate ဆုတ်ခွာ၏မျိုးစုံညွှန်းကိန်း၏ naloxone မှဆွေမျိုး sensitivity ကို: တစ်အရေအတွက်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1994) 271: 1391-8 ။ [PubMed]
66 ။ Gardner EL, Vorel SR ။ Cannabinoid ဂီယာနှင့်ဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များ။ Neurobiol dis (1998) 5: 502-33.10.1006 / nbdi.1998.0219 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
67 ။ Epping-ဂျော်ဒန်လွှတ်တော်အမတ်, Watkins အက်စ်အက်စ်, Koob gf, နီကိုတင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် function ကိုအတွက် Markou အေပြဇာတ်လျှောက်လျော့နည်း။ သဘာဝတရား (1998) 393: 76-9.10.1038 / 30001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
68 ။ Schulteis, G, Markou တစ်ဦးက, Cole ကို M က, Koob gf ။ အီသနောဆုတ်ခွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လျော့နည်းသွားသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1995) 92: 5880-4.10.1073 / pnas.92.13.5880 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
69 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းဘို့ Neurobiological အလွှာဟာ။ Neuropharmacology (2009) 56: 18-31.10.1016 / j.neuropharm.2008.07.043 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
70 ။ Kenny PJ, Poly ငါ Koob gf, Markou အေအနိမျ့ထိုးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးယာယီတိုးပွါးပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ထိုးကင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience (2003) 17: 191-5.10.1046 / j.1460-9568.2003.02443.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
71 ။ လျူ J ကို, Schulteis G. အဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုစူးရှ opioid မှီခိုရာမှ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာအတူလိုက်ပါ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2004) 79: 101-8.10.1016 / j.pbb.2004.06.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
72 ။ Schulteis, G, လျူဂျေဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုကြွက်များတွင်စူးရှသောအီသနောထံမှဆုတ်ခွာ (ရက်နာ) နှင့်အတူလိုက်ပါ။ အရက် (2006) 39: 21-8.10.1016 / j.alcohol.2006.06.008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
73 ။ Ahmed က SH, Walker က JR, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးတင်းမာမှုများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent တိုး။ Neuropsychopharmacology (2000) 22: 413-21.10.1016 / S0893-133X (99) 00133-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
74 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ အလယ်အလတ်ကနေအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုမှအကူးအပြောင်း: hedonic set ကိုအမှတ်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ သိပ္ပံ (1998) 282: 298-300.10.1126 / science.282.5387.298 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
75 ။ Kitamura အို Wee က S, Specio SE, Koob gf, ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Pulvirenti အယ်လ်စက်လှေကား: တစ်ထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကို။ Psychopharmacology (Berl) (2006) 186: 48-53.10.1007 / s00213-006-0353-z [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
76 ။ O'Dell LE, Roberts သည် AJ, Smith က RT ကို, Koob gf ။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအပြီးအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Enhanced ။ အရက် Clin Exp Res (2004) 28: 1676-82.10.1097 / 01.ALC.0000145781.11923.4E [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
77 ။ ဂျော့ခ်ျအို Ghozland S က, Azar MR, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Parsons LH, et al ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2007) 104: 17198-203.10.1073 / pnas.0707585104 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
78 ။ Quadro ထားတဲ့ IM, Miczek Ka ။ ပြင်းထန်သောကင်း Bing နှစျယောကျသည် Modes: လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကြောင့်ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေများစားသုံးမှု၏တိုးပွားလာမှုနှုန်းအပြီးဇွဲတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Psychopharmacology (Berl) (2009) 206: 109-20.10.1007 / s00213-009-1584-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
79 ။ Vendruscolo L ကို, Schlosburg je, Misra KK, Chen က SA, Greenwell TN, Koob gf ။ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲနိုင်၏ကွဲပြားကာလစက်လှေကားပုံစံများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2011) 98: 570-4.10.1016 / j.pbb.2011.03.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
80 ။ Ahmed က SH, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက်ကြာရှည်တိုး။ Psychopharmacology (Berl) (1999) 146: 303-12.10.1007 / s002130051121 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
81 ။ Deroche V ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience (1999) 11: 2731-6.10.1046 / j.1460-9568.1999.00696.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
82 ။ Mantsch JR, Yuferov V ကို, Mathieu-Kia လေး, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) (2004) 175: 26-36.10.1007 / s00213-004-1778-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
83 ။ Paterson NE, Markou အေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းပြီးနောက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်။ Neuroreport (2003) 14: 2229-32.10.1097 / 00001756-200312020-00019 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
84 ။ Wee က S, Mandyam CD ကို, Lekic DM, Koob gf ။ α1အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် -Noradrenergic system ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ EUR Neuropsychopharmacol (2008) 18: 303-11.10.1016 / j.euroneuro.2007.08.003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
85 ။ Walker က BM, Koob gf ။ အဆိုပါγ-aminobutyric အက်ဆစ်-B ကအဲဒီ receptor agonist baclofen အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန် attenuates ။ အရက် Clin Exp Res (2007) 31: 11-8.10.1111 / j.1530-0277.2006.00259.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
86 ။ Deroche V ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည်။ EUR J ကို neuroscience (1999) 11: 2731-6.10.1046 / j.1460-9568.1999.00696.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
87 ။ Jonkman S က, Pelloux Y ကို, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုလုံလောက်ပေမယ့်အေးစက်တိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးရှာ compulsive ကိုကင်းများပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 1612-9.10.1038 / npp [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
88 ။ ဗင်္ရက်ရှာဟာအို Posthumus EJ, Waldroup လုပ် SA, Ettenberg အေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းမှတိုးချဲ့နေ့စဉ် access ကိုအောက်ပါမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံလှုံ့ဆျောမှုကြီးထွား။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2008) 32: 863-9.10.1016 / j.pnpbp.2008.01.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
89 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ (2004) 305: 1017-9.10.1126 / science.1098975 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
90 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ (2004) 305: 1014-7.10.1126 / science.1099020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
91 ။ Pelloux Y ကို, Everitt BJ, ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာကြွက်များကရှာကြံ Dickinson အေ compulsive မူးယစ်ဆေး: သမိုင်းယူပြီးမူးယစ်ဆေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) (2007) 194: 127-37.10.1007 / s00213-007-0805-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
92 ။ Vendruscolo LF, Barbier အီး, Schlosburg je, Misra KK, Whitfield T က, Jr. Logrip ML, et al ။ Corticosteroid-မှီခို plasticity ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအရက်သေစာသောက်သုံး mediates ။ J ကို neuroscience (2012) 32: 7563-71.10.1523 / JNEUROSCI.0069-12.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
93 ။ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2004) 27: 827-39.10.1016 / j.neubiorev.2003.11.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
94 ။ ဗင်္ရက်ရှာဟာအို Ahmed က SH, Koob gf, Ettenberg အေထိန်းချုပ်ထားရာမှ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res (2004) 995: 46-54.10.1016 / j.brainres.2003.09.053 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
95 ။ Knackstedt LA က, Kalivas PW ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုမူးယစ်ဆေး-ရစေတယ် reinstatement သော်လည်းမအပြုအမူာင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2007) 322: 1103-9.10.1124 / jpet.107.122861 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
96 ။ Ahmed က SH, compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကနေ psychomotor အကဲဆတ်ခြင်း Cador အမ် Dissociation ။ Neuropsychopharmacology (2006) 31: 563-71.10.1038 / sj.npp.1300834 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
97 ။ Ahmed က SH, Kenny PJ, Koob gf, မြင့်တက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် hedonic allostasis များအတွက် Markou အေ Neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ နတ် neuroscience (2002) 5: 625-6 ။ [PubMed]
98 ။ ဂျန် CG, Whitfield T က, Schulteis, G, Koob gf တစ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့သောပြည်နယ်၏ Wee အက်စ်အသိမြှကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ access ကိုစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေထပ်ခါတလဲလဲဆုတ်ခွာစဉ်က။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 225: 753-63.10.1007 / s00213-012-2864-0 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
99 ။ Kenny PJ, Chen က SA, Kitamura အို Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ အေးစက်ဆုတ်ခွာဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုမောင်းနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို neuroscience (2006) 26: 5894-900.10.1523 / JNEUROSCI.0740-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
100 ။ Harris က AC အ, Pentel PR စနစ်, Burroughs: D, Staley MD, Lesage MG ။ နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ကြွက်များတွင်အစားထိုးနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ပြင်းထန်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမရှိခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 217: 153-66.10.1007 / s00213-011-2273-9 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
101 ။ Shurman J ကို, Koob gf, Gutstein HB ။ Opioids, နာကျင်မှု, ဦးနှောက်နှင့် hyperkatifeia: နာကျင်မှုများအတွက် opioids များ၏ဆင်ခြင်တုံတရားအသုံးပြုမှုအတွက်မူဘောင်။ နာကျင်မှု Med (2010) 11: 1092-8.10.1111 / j.1526-4637.2010.00881.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
102 ။ ဒိုင်ယာနာ M က, Pistis M က, Carboni S က, Gessa GL, Rossetti ZL ။ ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါစဉ်အတွင်း mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏လေးနက်လျှော့: electrophysiological နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်သေအထောက်အထား။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1993) 90: 7966-9.10.1073 / pnas.90.17.7966 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
103 ။ ဒိုင်ယာနာ M က, Pistis M က, Muntoni တစ်ဦးက, မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု Gessa G. အလေးနက်ကျဆင်းခြင်း။ J ကို Phamacol Exp Ther (1995) 272: 781-5 ။ [PubMed]
104 ။ Parsons LH, Koob gf, သွေးကြောသွင်းကင်းရန်န့်အသတ် access ကိုအပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် Weiss အက်ဖ် serotonin ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1995) 274: 1182-91 ။ [PubMed]
105 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Clin Invest (2003) 111: 1444-51.10.1172 / JCI18533 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
106 ။ Mhatre MC, Pena, G, Sieghart W က, Ticku MK ။ ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor alpha subunits ဘို့တိကျတဲ့ပဋိချ-Regulation ကြောင့်နာတာရှည်အရက်ကုသမှုထုတ်ဖေါ် ကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် -subunit စကားရပ်။ J ကို Neurochem (1993) 61: 1620-5.10.1111 / j.1471-4159.1993.tb09795.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
107 ။ Devaud ll, Fritschy JM, Sieghart W က, နက်ဖြန် AL ။ ဂါဘမြို့သား၏ Bidirectional ပွောငျးလဲA နာတာရှည်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကကြွက် cortex အတွက်အဆင့်ဆင့် pepetide အဲဒီ receptor subunit ။ J ကို Neurochem (1997) 69: 126-30.10.1046 / j.1471-4159.1997.69010126.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
108 ။ Sapru MK, စိန်, ငါဂေါ်ဒွန် AS ။ Adenosine receptors NG108-15 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အီသနောမှဆယ်လူလာလိုက်လျောညီထွေဖျန်ဖြေ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1994) 271: 542-8 ။ [PubMed]
109 ။ အခွင့်အလမ်း WT, ရဲအရာရှိက S, ဖုန်ကြားရှင်က F, ပရိုတိန်း antisense oligonucleotide binding သိသိ amp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်နှင့်အတူ pretreatment အားဖြင့် NPY-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ Balasubramaniam အေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း။ Neuropeptides (2000) 34: 167-72.10.1054 / npep.2000.0807 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
110 ။ နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး SC ။ အရက်စွဲ၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ပရိုတိန်း binding အဆိုပါမျိုးဗီဇကူးယူအချက်သိသိ amp-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်။ Pharmacol Ther (2004) 104: 47-58.10.1016 / j.pharmthera.2004.08.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
111 ။ Rivier ကို C, Bruhn T က, အီသနော၏ခြိုငျ့ဒဗလျူ Effect ကြွက်များတွင် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအပေါ်: corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1984) 229: 127-31 ။ [PubMed]
112 ။ et al Merlo-Pich အီး, Lorang M က, Yeganeh M က, Rodriguez က de Fonseca က F, Raber J ကို, Koob gf ။ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏တိုးတက်လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience (1995) 15: 5439-47 ။ [PubMed]
113 ။ Rasmussen DD, နိုငျငံ BM, Bryant, CA, Mitton DR, Larsen လုပ် SA, Wilkinson CW ။ နာတာရှည်နေ့စဉ်အီသနောနှင့်ဆုတ်ခွာ: 1 ။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကို။ အရက် Clin Exp Res (2000) 24: 1836-49.10.1111 / j.1530-0277.2000.tb01988.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
114 ။ သံလွင် MF, Koenig HN, Nannini MA, Hodge CW ။ နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျော့ချရေးစဉ်အတွင်း stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular CRF အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2002) 72: 213-20.10.1016 / S0091-3057 (01) 00748-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
115 ။ Delfs JM, Zhu Y ကို, Druhan JP, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Noradrenaline အဆိုပါ ventral forebrain အတွက် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဘို့အရေးကြီးသည်။ သဘာဝတရား (2000) 403: 430-4.10.1038 / 35000212 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
116 ။ et al ရောဘတ်က M, Cruz MT, Gilpin ဘ, Sabino V ကို, Schweitzer P ကို, Bajo M က။ အချက်-သွေးဆောင် amygdala gamma-aminobutyric အက်ဆစ်လွှတ်ပေးရန်လွှတ် Corticotropin အရက်မှီခိုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 67: 831-9.10.1016 / j.biopsych.2009.11.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
117 ။ Sarnyai Z ကို, Biro အီး, Gardi J ကို, Vecsernyes M က, Julesz J ကို, Telegdy G. အဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် "စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော" အပြုအမူ mediates ။ ဦးနှောက် Res (1995) 675: 89-97.10.1016 / 0006-8993 (95) 00043-P ကို ​​[PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
118 ။ Basso လေး, Spina M က, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်ရန်ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်းအောက်ပါမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အတွက်ခုခံကာကွယ်မွှေးပါရာဒိုင်းရှိ "anxiogenic-ကဲ့သို့" အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuates ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Psychopharmacology (Berl) (1999) 145: 21-30.10.1007 / s002130051028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
119 ။ Navarro-Zaragoza J ကို, Núñezကို C, Laorden ML, Milan သင်္ဘော MV ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာဖို့ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်ကတုံ့ပြန်မှုအပေါ် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-1 ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Mol Pharmacol (2010) 77: 864-73.10.1124 / mol.109.062463 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
120 ။ Iredale PA ဆိုပြီး, Alvaro JD, Lee က Y ကို, Terwilliger R ကို, ချန် YL, Duman သည် RS ။ opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-1 ၏အခန်းက္ပ။ J ကို Neurochem (2000) 74: 199-208.10.1046 / j.1471-4159.2000.0740199.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
121 ။ Baldwin HA, Rassnick S က, Rivier J ကို, Koob gf, Britton KT ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology (Berl) (1991) 103: 227-32.10.1007 / BF02244208 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
122 ။ Knapp DJ သမား, Overstreet DH, Moy အက်စ်အက်စ်, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ SB242084, flumazenil နှင့်ကြွက်များတွင် CRA1000 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်။ အရက် (2004) 32: 101-11.10.1016 / j.alcohol.2003.08.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
123 ။ Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ CRF နှင့် CRF ခြင်းဖြင့်မျိုးစုံအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Modulation1 receptors ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2004) 77: 405-13.10.1016 / j.pbb.2003.11.010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
124 ။ funk CK, Zorrilla EP, Lee က MJ, ဆန် KC, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက် 1 ရန်ရွေးချယ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 61: 78-86.10.1016 / j.biopsych.2006.03.063 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
125 ။ Rassnick S က, Heinrich SC, Britton KT, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ Microinjection အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက် Res (1993) 605: 25-32.10.1016 / 0006-8993 (93) 91352-S က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
126 ။ Tucci S က, Cheeta S က, ရှေ P ကို, အရှေ့တောင် File ။ အချက်ရန်, α-helical CRF လွှတ် Corticotropin9-41, နီကိုတင်း-သွေးဆောင်ခြွင်းချက်မရှိ, စိုးရိမ်ပူပန်အေးစက်ပေမယ့်မပေးနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology (Berl) (2003) 167: 251-6 ။ [PubMed]
127 ။ Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Navarro အမ်မတိုင်မီကမျိုးစုံအီသနောထုတ်ယူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်: CRF အားဖြင့်တားစီး1- နှင့် benzodiazepine-receptor ရန်နှင့် 5-HT1a-receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology (2005) 30: 1662-9.10.1038 / sj.npp.1300706 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
128 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Zorrilla EP, Roberts သည် AJ, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအီသနော abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တိုးမြှင့်တုန့်ပြန် attenuates ။ အရက် (2003) 29: 55-60.10.1016 / S0741-8329 (03) 00020-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
129 ။ Huang က MM, Overstreet DH, Knapp DJ သမား, အိန်ဂျယ် R ကို, သေတမ်းစာက TA, Navarro M က, et al ။ Corticotropin-releasing အချက် (CRF) အီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ာင်းတိကျတဲ့နှင့် CRF-1 receptors ကကမကထပြုခဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ site ဖြစ်ပါသည်: စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ာင်းစပ်လျဉ်း။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2010) 332: 298-307.10.1124 / jpet.109.159186 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
130 ။ Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ မူးယစ်ဆေးစိန်ခေါ်မှုများမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်- သာ. နှစ်သက် P ကိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်၏ဖိစီးမှုကိုပံ့ပိုးကူညီ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်။ အရက် Clin Exp Res (2007) 31: 1473-81.10.1111 / j.1530-0277.2007.00445.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
131 ။ သေတမ်းစာက TA, Knapp DJ သမား, Overstreet DH, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အသိ, ကြာချိန်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောဆုတ်ခွာအောက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ အရက် Clin Exp Res (2009) 33: 455-63.10.1111 / j.1530-0277.2008.00856.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
132 ။ လက် TH, Koob gf, Stinus L ကို, opiate အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏က Le Moal အမ်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများ: နုံနဲ့မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်သီးသန့်ဗဟိုဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့အသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res (1988) 474: 364-8.10.1016 / 0006-8993 (88) 90452-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
133 ။ Stinus L ကို, Le Moal က M, Koob gf ။ နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအလွှာဖြစ်ကြသည်။ neuroscience (1990) 37: 767-73.10.1016 / 0306-4522 (90) 90106-E ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
134 ။ Stinus L ကို, Cador M က, Zorrilla EP, Koob gf ။ Buprenorphine နှင့် CRF1 ရန်ကြွက်များတွင် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့။ Neuropsychopharmacology (2005) 30: 90-8.10.1038 / sj.npp.1300487 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
135 ။ အဆိုပါ amygdala အတွက် Heinrich SC, Menzaghi က F, Schulteis, G, Koob gf, corticotropin-releasing အချက်၏ Stinus အယ်လ်နှိမ်နင်းရေးမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuates ။ ပြုမူနေ Pharmacol (1995) 6: 74-80.10.1097 / 00008877-199501000-00011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
136 ။ Contarino တစ်ဦးက, Papaleo အက်ဖ်အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-1 လမ်းကြောင်း opiate ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များ mediates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2005) 102: 18649-54.10.1073 / pnas.0506999102 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
137 ။ Bruijnzeel AW, Zislis, G, Wilson ကနေ C, ရွှေက MS ။ CRF receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်မိုးရွာသွန်းမှုနီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology (2007) 32: 955-63.10.1038 / sj.npp.1301192 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
138 ။ Bruijnzeel AW, အသေးစား, E, Pasek TM, Yamada အိပ်ချ် Corticotropin-releasing အချက်ကြွက်များတွင်အရက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ် dysphoria ကဲ့သို့သောပြည်နယ် mediates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2010) 210: 288-91.10.1016 / j.bbr.2010.02.043 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
139 ။ Marcinkiewcz, CA, Prado MM, ဣဇာက် SK ကို, မာရှယ်တစ်ဦးက, Rylkova: D, Bruijnzeel AW ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့်နျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက် shell ကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ် mediates accumbens ။ Neuropsychopharmacology (2009) 34: 1743-52.10.1038 / npp.2008.231 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
140 ။ Chartoff အီး, Sawyer တစ်ဦးက, Rachlin တစ်ဦးက, Potter: D, Pliakas တစ်ဦးက, Carlezon WA ။ Kappa opioid receptors ၏ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု attenuates ။ Neuropharmacology (2012) 62: 1167-76.10.1016 / j.neuropharm.2011.06.014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
141 ။ Schindler AG ကလီက S, Chavkin C. အပြုအမူစိတ်ဖိစီးမှုဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်းယန္တရားများထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦး dynorphin / Kappa-opioid အဲဒီ receptor-mediated ယန္တရားမှတဆင့်ကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုများ၏အကြိုး valence တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ Neuropsychopharmacology (2010) 35: 1932-42.10.1038 / npp [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
142 ။ et al မြေယာ BB, Bruchas MR, Schattauer S က, Giardino WJ, Aita M က, Messinger: D ။ အဆိုပါ dorsal raphe နျူကလိယထဲတွင် Kappa opioid အဲဒီ receptor ၏ activation စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု mediates နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာ reinstates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2009) 106: 19168-73.10.1073 / pnas.0910705106 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
143 ။ Redila VA သို့, ကိုကင်းရှာ၏ Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အဆိုပါ Kappa opioid သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) (2008) 200: 59-70.10.1007 / s00213-008-1122-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
144 ။ McLaughlin JP လီက S, Valdez J ကို, Chavkin က TA, Chavkin C. လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဟာ endogenous Kappa opioid သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Neuropsychopharmacology (2006) 31: 1241-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
145 ။ Knoll ကို AT, Meloni ဥပမာသောမတ်စ် JB, ကာရိုး FI, Carlezon WA ။ နားမလည်များ၏မော်ဒယ်များအတွက် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန်၏ဂျူနီယာ Anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနှင့်ကြွက်များတွင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သိလာတယ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2007) 323: 838-45.10.1124 / jpet.107.127415 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
146 ။ Specio SE, Wee က S, O'Dell LE, Boutrel B, Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology (Berl) (2008) 196: 473-82.10.1007 / s00213-007-0983-9 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
147 ။ Greenwell TN, Funk CK, ဝါဂွမ်း P ကိုရစ်ချတ်ဆင် HN, Chen က SA, ဆန် K သည်, et al ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ရန် long- ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့ပေမယ့်မရရေတို access ကိုကြွက်များ။ စှဲလမျးသူ Biol (2009) 14: 130-43.10.1111 / j.1369-1600.2008.00142.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
148 ။ Rimondini R ကို, Arlinde ကို C, Sommer W က, မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် Heilig အမ် Long-တည်တံ့တိုးနှင့်အရက်ဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ FASEB J ကို (2002) 16: 27-35.10.1096 / fj.01-0593com [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
149 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Roberts သည် AJ, ချမ်း K သည်, Davis က H ကို, နန်က M, Zorrilla EP, et al ။ စူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးလာ: corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့်စည်းမျဉ်း။ အရက် Clin Exp Res (2002) 26: 1494-501.10.1111 / j.1530-0277.2002.tb02448.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
150 ။ Gehlert DR, Cippitelli တစ်ဦးက, Thorsell တစ်ဦးက, က Le အေဒီ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Hamdouchi ကို C, et al ။ 3- (4-Chloro-2-morpholin-4-yl-thiazol-5-yl) -8- (1-ethylpropyl) -2,6-dimethyl-imidazo [1,2-b] pyridazine: အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှုနဲ့ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor, ဦးနှောက်-ထိုးဖောက်မှုဝတ္ထုနှုတ်မရရှိနိုင် 1 ရန်။ J ကို neuroscience (2007) 27: 2718-26.10.1523 / JNEUROSCI.4985-06.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
151 ။ funk CK, O'Dell LE, ခရော EF, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက်ဆုတ်ခွာ, အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်တိုးမြှင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး mediates ။ J ကို neuroscience (2006) 26: 11324-32.10.1523 / JNEUROSCI.3096-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
152 ။ Wee က S, Orio L ကို, Ghirmai S က, Cashman JR, Koob gf ။ Kappa opioid receptors ၏တားစီးကိုကင်းထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကင်းစားသုံးမှု attenuated ။ Psychopharmacology (Berl) (2009) 205: 565-75.10.1007 / s00213-009-1563-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
153 ။ Walker က BM, Zorrilla EP, Koob gf ။ မဟုတ်-binaltorphimine အားဖြင့်စနစ်κ-opioid အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်မှီခို-သွေးဆောင်အလွန်အကျွံအရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ စှဲလမျးသူ Biol (2010) 16: 116-9.10.1111 / j.1369-1600.2010.00226.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
154 ။ Whitfield TW, Jr. Wee က S, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်တစ်ဦး, Schlosburg J ကို, Vendruscolo L ကို, Koob gf ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး abstraction, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (2011) အတွက် Kappa receptor Activation underlying compulsive သမ်ဖက်တမင်းစားသုံးမှု Society က။ စိတ္တဇအဘယ်သူမျှမ: 797.19 ။
155 ။ Schlosburg je, Vendruscolo LF, Park က PE, Whitfield TW, Jr. Koob gf ။ Long-Term ၏ Kappa Opioid receptor တားဆီးစက်လှေကား၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး abstraction, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (2011) အတွက်အဘို့အ Motivation, ဘိန်းဖြူစားသုံးမှု Society ကတိုးမြှင့်။ စိတ္တဇအဘယ်သူမျှမ: 16.07 ။
156 ။ Nealey Ka, Smith က AW, Davis က SM, Smith က DG, Walker က BM ။ Kappa-opioid receptors ethanol- မှီခိုကြွက်များတွင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens nalmefene ၏တိုးမြှင့်အာနိသင််ပတ်သက်နေနေကြသည်။ Neuropharmacology (2011) 61: 35-42.10.1016 / j.neuropharm.2011.02.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
157 ။ Heilig M က, Koob gf ။ အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (2007) 30: 399-406.10.1016 / j.tins.2007.06.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
158 ။ Thorsell တစ်ဦးက, Slawecki CJ, Ehlers CL ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: neuropeptide Y နှင့် Wistar ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ် corticotropin-releasing အချက်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2005) 161: 133-40.10.1016 / j.bbr.2005.01.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
159 ။ Thorsell တစ်ဦးက, Slawecki CJ, Ehlers CL ။ အီသနောထိတွေ့မှုတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူ wistar ကြွက်များတွင်အရက်သေစာသောက်သုံးသူနဲ့ဆက်စပ်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေအပေါ် neuropeptide Y ကိုသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res (2005) 29: 584-90.10.1097 / 01.ALC.0000160084.13148.02 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
160 ။ Gilpin ဘ, Stewart က RB, မာဖီ JM, Li က TK, Badia-အသက်ကြီး NE ။ Neuropeptide Y ကိုချမှတ်ထားအီသနော abstinence တဲ့ကာလအောက်ပါအရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များတွင်ခံတွင်းအီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အရက် Clin Exp Res (2003) 27: 787-94.10.1097 / 01.ALC.0000065723.93234.1D [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
161 ။ Gilpin ဘ, Misra K ကို Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Neuropeptide Y ကိုအရက်သောက်သုံးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးဖိနှိပ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2008) 90: 475-80.10.1016 / j.pbb.2008.04.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
162 ။ et al Thorsell တစ်ဦးက, Rapunte-Canonigo V ကို, O'Dell L ကို, ချန်လုပ် SA ဘုရင်တစ်ဦးက, Lekic: D ။ viral vector-သွေးဆောင် NPY overexpression ပြောင်းပြန် amygdala Wistar ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲခြို့ငဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အရက်စားသုံးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဦးနှောက် (2007) 130: 1330-7.10.1093 / ဦးနှောက် / awm033 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
163 ။ Gilpin ဘ, Misra K ကို Herman MA, Cruz MT, Koob gf, ရောဘတ်အမ် Neuropeptide Y ကိုအရက် amygdala အတွက် gamma-aminobutyric အက်ဆစ်လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်လုပ်ကွက်အရက်မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းဆန့်ကျင်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2011) 69: 1091-9.10.1016 / j.biopsych.2011.02.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
164 ။ Sørensen, G, Wortwein, G, က Fink-Jensen တစ်ဦးက, Woldbye DPD ။ Neuropeptide Y ကို Y5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပိုမြန်သုဉ်းစေပြီးကိုကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအတွက် reinstatement attenuates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2013) 105: 151-6.10.1016 / j.pbb.2013.02.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
165 ။ Sørensen, G, ဂျင်ဆင်က M, Weikop P ကို, Dencker: D, Christiansen SH, Loland CJ, et al ။ Neuropeptide Y ကို Y5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှု attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) (2012) 222: 565-77.10.1007 / s00213-012-2651-y က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
166 ။ Sørensen, G, Woldbye DP ။ neuropeptide Y ကိုပြသချို့တဲ့ကြွက်တွေကိုကင်းမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ synapses (2012) 66: 840-3.10.1002 / syn.21568 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
167 ။ Maric T က, Tobin က S, Quinn T က, Shalev U. စားနပ်ရိက္ခာဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံဘိန်းဖြူ reinstatement အပေါ် neuropeptide Y ကို၏ဆင်းရဲချို့တဲ့ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2008) 194: 39-43.10.1016 / j.bbr.2008.06.023 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
168 ။ Maric T က, Cantor တစ်ဦးက, Cuccioletta H ကို, Tobin က S, Shalev U. Neuropeptide Y ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-သွေးဆောင် hyperlocomotion ကြီးထွားများပြားစေ။ Peptides (2009) 30: 721-6.10.1016 / j.peptides.2008.11.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
169 ။ Aydin ကို C, Oztan အိုနီကိုတင်း abstinence-related လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ် Y2R ရန်, JNJ-31020028 ၏ Isgor C. အကျိုးသက်ရောက်မှု, neuropeptide Y နှင့် corticotropin ဟာအသစ်အဆန်း-ရှာကြံ phenotype အတွက်အချက် mRNA အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ချိ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2011) 222: 332-41.10.1016 / j.bbr.2011.03.067 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
170 ။ Rylkova: D, Boissoneault J ကို, ဣဇာက်က S, Prado M က, Shah က HP က, Bruijnzeel AW ။ NPY နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် Y1 အဲဒီ receptor agonist ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ [D-သူ့26ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုများနှင့်ကြွက်များအတွက်နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ် somatic ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်လိုငွေပြမှုအပေါ်] -NPY ။ Neuropeptides (2008) 42: 215-27.10.1016 / j.npep.2008.03.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
171 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Koob gf ။ Allostasis နှင့် corticotropin-releasing အချက်နှင့် Neuropeptide Y ကိုစနစ်များ dysregulation: အရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2004) 79: 671-89.10.1016 / j.pbb.2004.09.020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
172 ။ ဂျော့ခ်ျအို Mandyam CD ကို, Wee က S, Koob gf ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတိုးချဲ့ access ကိုကြာရှည် prefrontal Cortex-မှီခိုအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology (2008) 33: 2474-82.10.1038 / sj.npp.1301626 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
173 ။ Briand LA က, Flagel SB, Garcia က-Fuster et al MJ, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို, Sarter M က။ သိမြင်မှု function ကိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းရန်, တိုးချဲ့, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ access ကိုအောက်ပါ prefrontal dopamine D2 receptors အတွက် persistent ပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology (2008) 33: 2969-80.10.1038 / npp.2008.18 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
174 ။ Briand LA က, စုစုပေါင်း JP, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ တိုးချဲ့-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာအောက်ပါအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုချို့ယွင်း။ neuroscience (2008) 155: 1-6.10.1016 / j.neuroscience.2008.06.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
175 ။ ဂျော့ခ်ျအို Sanders က C, Freiling J ကို, Grigoryan အီး, Vu S က, Allen က CD ကို, et al ။ အရက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း medial prefrontal cortex အာရုံခံ၏န်ထမ်းခေါ်ယူမှုသိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2012) 109: 18156-61.10.1073 / pnas.1116523109 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
176 ။ Boyson CO, Miguel TT, Quadro ထားတဲ့ IM, Debold JF, Miczek Ka ။ ကြွက် VTA အတွက် CRF-R1 ရန်အားဖြင့်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု-ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 257-69.10.1007 / s00213-011-2266-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
177 ။ Carlezon WA, Jr. Thome J ကို, Olson VG, ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N ကို, et al ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ (1998) 282: 2272-5.10.1126 / science.282.5397.2272 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
178 ။ Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ (1988) 242: 715-23.10.1126 / science.2903550 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
179 ။ Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience (2001) 2: 119-28.10.1038 / 35053570 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
180 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်း၏ Neuroadaptive ယန္တရားများ: အတိုးချဲ့ amygdala အပေါ်လေ့လာမှုများ။ EUR Neuropsychopharmacology (2003) 13: 442-52.10.1016 / j.euroneuro.2003.08.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
181 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Delfs JM, Druhan J ကို, Zhu Y. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် noradrenergic လုပ်ရပ်များများအတွက်ပစ်မှတ် site ကို။ ခုနှစ်တွင်: McGinty JF အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ဖို့ Ventral Striatum ကနေတိုးတက်: Neuropsychiatry နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ (Vol 877) ၏ရာဇဝင်, နယူးယောက်: ။ ။ ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; (1999) p 486 -98 ။ [PubMed]
182 ။ Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေလူပျိုကင်းထိတွေ့မှု Vivo အတွက် dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ သဘာဝတရား (2001) 411: 583-7.10.1038 / 35079077 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
183 ။ Edwards က S နဲ့, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် dysregulated စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ Neurobiology ။ အနာဂတ် Neurol (2010) 5: 393-410.10.2217 / fnl.10.14 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
184 ။ ရှောလမုန်သည် RL ။ ဝယ်ယူလှုံ့ဆျောမှု၏ပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: အပျြောအပါးများ၏စရိတ်နှင့်နာကျင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ နံနက် Psychol (1980) 35: 691-712.10.1037 / 0003-066X.35.8.691 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
185 ။ Cohen ကိုတစ်ဦး, Koob gf, နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် abstinence ၏ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကာလထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူနီကိုတင်းစားသုံးမှု၏ဂျော့ခ်ျ O. ကြံ့ခိုင်တင်းမာမှု။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 2153-60.10.1038 / npp.2012.67 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
186 ။ Edwards က S နဲ့, Guerrero M က, Ghoneim OM, ရောဘတ်အီး, Koob gf ။ အထောက်အထားကြောင်း vasopressin V ကို1b receptors အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အလွန်အကျွံသောက်သုံးရန်အကူးအပြောင်းဖျန်ဖြေ။ စှဲလမျးသူ Biol (2011) 17: 76-85.10.1111 / j.1369-1600.2010.00291.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
187 ။ Barbier အီး, Vendruscolo LF, Schlosburg je, Edwards က S နဲ့, Juergens N ကို, Park က PE, et al ။ အဆိုပါ NK1 အဲဒီ receptor ရန် L822429 ဘိန်းဖြူအားဖြည့်ပါလျော့ကျစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology (2013) ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) 10.1038 / npp.2012.261 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
188 ။ Wee က S, ဝမ် Z ကို, Woolverton WL, Pulvirenti L ကို, Koob gf ။ aripiprazole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း: D2 အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်မှုနှုန်းအပေါ်အဲဒီ receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology (2007) 32: 2238-47.10.1038 / sj.npp.1301353 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
189 ။ လျူ ZH, Jin က WQ ။ နီကိုတင်းဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကျဆင်းခြင်း။ Neuroreport (2004) 15: 1479-81.10.1097 / 01.wnr.0000126218.25235.b6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
190 ။ ရစ်ချတ်ဆန် HN, Zhao နှင့် Y ကို, Fekete EM, Funk CK, Wirsching P ကို, Janda KD, et al ။ MPZP: တစ်ဝတ္ထုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး corticotropin-releasing အချက်အမျိုးအစား 1 အဲဒီ receptor (CRF1) ရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2008) 88: 497-510.10.1016 / j.pbb.2007.10.008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
191 ။ Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်: အတွင်းမှောင်မိုက်။ Curr Opin Neurobiol (2013) ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) 10.1016 / j.conb.2013.03.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]